လူတိုင်းတွင် ဆန္ဒပြမှုများကိုမှတ်တမ်းတင်ရန် နှင့် စောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်ရှိသည်
ဆန္ဒပြမှုအပေါ် စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းနှင့် အစီရင်ခံရန် အလွန်အရေးကြီးသည်
ပါဝင်သူများနှင့် အခြေအနေအရပ်ရပ်ကို သိရှိနားလည်ပါ။
ဆန္ဒပြပွဲအတွက်နေရာယူထားမည့် နေရာကို သိရှိနားလည်ပါ။
အန္တရာယ် နှင့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဆန်းစစ်ခြင်း။
လုံခြုံရေးအတွက် သေချာစွာ အစီစဉ်ထားရှိပါ။
စောင့်ကြည့်လေ့လာသော ပရိုဖိုင်ကို သတ်မှတ်ခြင်း
သင်၏ ခွန်အားများကို ခြွေတာပါ။
အသံ၊ ဓါတ်ပုံများနှင့် ဗွီဒီယိုများကို တာဝန်သိစွာမှတ်တမ်းတင်ပါ
လုံခြုံရေး အချက်ပြများ စောင့်ကြည့်ပါ
ဖြစ်လေ့ရှိသည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို ဂရုပြုပါ
သင်၏ အထောက်အထားများကို ကာကွယ်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ကြောက်ရွှံ့မှုကို ထိန်းပါ
ဆန္ဒပြပွဲမှ ဘေးကင်းစွာ ထွက်ခွာပါ
လှုပ်ရှားမှုများအား ပြန်လည်မှတ်သားပြီး ပုံစံတကျအဆုံးသတ်ခြင်းရှိပါစေ
လုံခြုံစွာနှင့် ထိထိရောက်ရောက်ရှိစွာ ထုတ်ဝေခြင်းပြုပါ
ဆန္ဒပြပွဲကို သွားမလား? သင့်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ပါ!
လူ့အခွင့်အရေး ရှုထောင့်မှ ကြည့်လျှင် ဆန္ဒပြမှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် နှင့် စောင့်ကြည့်ပိုင်ခွင့်သည် နိုင်ငံတကာ လူမှုအခွင့်အရေး နှင့် ပတ်သတ်သော ဥပဒေ စံချိန်စံညွှန်းများအရ လူတိုင်းအတွက် အကျုံး ၀င်ပါသည်။
မြောက်မြားစွာသော အခြေခံလူ့အခွင့်အရေး အသုံးချမှုများတွင် တရား၀င် ဆန္ဒပြခွင့်သည် ပါ၀င်နေပြီး ထိုအရာသည် မည်သည့် ဒီမိုကရေစီစနစ်တွင်မဆို မရှိမဖြစ် လိုအပ်သော အဓိကကျသည့် လုပ်ဆောင်မှု တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။ လူ့အဖွဲ့အစည်းအားလုံးတွင် အရေးပါသော်ငြားလည်း ဆန္ဒပြမှု အနည်းစုသာလျှင် အခြားသူများ ၏ အန္တရာယ် နှင့် ကင်းဝေးနိုင်သည့် အခြေအနေများ ရှိပါသည်။ ထို့ကြောင့် နိုင်ငံတကာ စံနှုန်းများသည် အချို့သော ဆန္ဒပြခွင့်များကို ရံဖန်ရံခါ တင်းကျပ်မှုများ ဖြစ်ပေါ်စေနိုင်ပါသည်။ ထိုသို့ တားမြစ်ကန့်သတ်ချက်များ ရှိသော်လည်း အခြေအနေအရပ်ရပ်ပေါ် မူတည်၍ ခွင့်ပြုမှုများလည်း ရှိပါသည်။ နိုင်ငံတကာ လူ့အခွင့်အရေး ဉပဒေများ၏ အာမခံမှုများ ရှိနေသော်လည်း ပြည်နယ်များအနေနှင့် ဤနယ်ပယ်တွင်ရှိသော တာ၀န်၀တ္တရားများကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်နှင့် အကောင်အထည်ဖေါ်ရန် ထိရောက်သော လမ်းညွှန်မှုများ လိုအပ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် စောင့်ကြည့်သူများ မှတ်တမ်းတင်သူများနှင့် စာနယ်ဇင်း သတင်းသမားများ၏ လုပ်ဆောင်မှုများသည် အစိုးရအား တာ၀န်ခံမှု ရှိစေရန် အရေးကြီးသော အထောက်အထားများဖြစ်လာသည်။ လွတ်လပ်စွာထုတ်ဖော်ပြောဆိုခွင့်နှင့် ငြိမ်းချမ်းစွာ စုဝေးခြင်း အခွင့်အရေးများသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး များသည် အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး ကြေငြာစာတမ်း၏ဆောင်းပါး ၁၉ နှင့် ၂၀ Universal Declaration of Human Rights, ဖြင့်လည်းကောင်း “အရပ်ဘက်နှင့် နိုင်ငံရေး အခွင့်အရေးအပေါ် နိုင်ငံတကာ သဘောတူချက်” International Covenant on Civil and Political Rights ဖြင့်လည်းကောင်း ကာကွယ်ထားသည်။
သတင်းအချက်အလက် စုဆောင်းခြင်းနှင့် အစီရင်ခံခြင်းသည် ဆန္ဒပြမပြမီ၊ ဆန္ဒပြနေချိန်နှင့် ဆန္ဒပြပြီးနောက်ပိုင်းတွင် တစ်ဦးတစ်ယောက်စီတိုင်း၏ လုံခြုံမှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။
ဆန္ဒပြပွဲ နှင့် အများပြည်သူရှေ့တွင် ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် ချိုးဖေါက်နှိပ်စက်မှုများ အကြောင်းပါ၀င်သည့် ဘက်မလိုက် သမာသမက်ကျသော သတင်းအချက်အလက်များကို ရရှိနိုင်သည့် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင် ခြင်းများပြုလုပ်ခြင်းသည် လွတ်လပ်စွာ စုရုံးခွင့် အသင်းများ ဖွဲ့စည်းခွင့်နှင့် ဆန္ဒပြခွင့်များကို ဆက်လက်လုပ်ဆောင် နိုင်ရန် အရေးကြီးသည့် နည်းဗျူဟာ ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းသည် ဆန္ဒပြပွဲကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် အကြောင်းအရာများ နှင့် ဆန္ဒပြပွဲ ၏ တောင်းဆိုမှုများကို အများပြည်သူ သိရှိစေရန် ကူညီပေးသရုံသာမက အလွဲသုံးစား ပြစ်မှုကျူးလွန်မှုများ ရှိနေခဲ့လျှင်လည်း ထိုလုပ်ဆောင်သူများကို မြင်သာစေပါသည်။
သင်၏ ဘက်မလိုက်သော စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများ မှ တစ်ဆင့် အစိုးရအာဏာပိုင်များနှင့် လူ့အသိုင်းအဝိုင်းကြား ဆန္ဒပြခွင့်အား လက်ခံနိုင်မှု မြင့်မားလာအောင်လည်း လုပ်ဆောင်နိုင်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက, စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများသည် ဆန္ဒပြပွဲကို တားဆီးသူများ ၏ လုပ်ရပ်များကို ပြည်သူလူထုသိအောင် ပြသနိုင်ပြီး တရားဉပဒေ အရ လုပ်ဆောင် နိုင်သောကြောင့် ဆန္ဒပြသူများကို တိုက်ခိုက်နေခြင်းကို ဟန့်တားနိုင်သည့် အကျိုးရှိနိုင်သည်။
ထပ်မံဖတ်ရှုပါ စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားမှုကို အထောက်အကူပြုနိုင်သည့် နည်းပညာ အချို့ ရှိသော်လည်း ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တစ်ယောက်၏ ကျွမ်းကျင်မှုကဲ့သို့ မလိုအပ်ပါ။ သို့သော် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်ထားမှုများကို အမှန်တကယ် ထိရောက်စေရန် သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များသည် တိကျမှန်ကန်၍ ဘက်လိုက်မှု မရှိစေရပါ။
သင့်အလုပ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သင်ကိုယ်တိုင်၏ ပြုမူလှုပ်ရှားမှုနှင့် သင်စုဆောင်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များ၏ ယုံကြည်မှန်ကန်မှုပေါ်တွင် များစွာမူတည်ပါသည်။ သင့်အလုပ်တွင် ပါ၀င်လှုပ်ရှားသူ အားလုံးအကြား ယုံကြည်မှုနှင့် လေးစားမှုကို တည်ထောင်ရန် လွပ်လပ်မှု ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် သမာသမက်ရှိစွာ ပြုမူဆောင်ရွက်ပါရန်။ ရဲများသည် စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သူများ နှင့် မီဒီယာသမားများကို ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီ ၊ ဆန္ဒပြပွဲကာလနှင့် ဆန္ဒပြပွဲပြီးဆုံး ချိန်များအထိ ပါဝင်ကူညီသင့်ပါသည်။
ကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကျ တိကျသော သတင်းအချက်အလက်များကို စုဆောင်းနိုင်ရန် အလွန် အရေးကြီးပါသည်။ သင့်အလုပ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုသည် သင်ကိုယ်တိုင်၏ ပြုမူလှုပ်ရှားမှုနှင့် သင်စုဆောင်းထားသော သတင်းအချက်အလက်များ၏ ယုံကြည်မှန်ကန်မှုပေါ်တွင် များစွာ မူတည်ပါသည်။ ပွင့်လင်းမြင်သာမှုနှင့် သမာသမက်ရှိစွာ အမြဲတမ်း ပြုမူနေထိုင်ဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုမှသာလျှင် သဘောထားတူသော အဖွဲ့များနှင့် ယုံကြည်မှုကို တည်ဆောက်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။ အခြေအနေအပေါ် မူတည်၍လည်း ရဲနှင့် အခြား အာဏာပိုင်များရှေ့တွင် ခိုင်မာသော ရပ်တည်မှုကို ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
လမ်းများသည် လူတိုင်းပိုင်ဆိုင်ပါသည်။ ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်း သို့မဟုတ် ဘက်လိုက်သော သဘောထားများကို သင့်ရဲ့လုပ်ဆောင်မှုများတွင် ဖေါ်ပြခြင်းမျိုး ရှောင်ကျဉ်ပါရန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာ တိမ်းညွတ်မှု၊ ကျားမ ဝိသေသလက္ခဏာ၊ လူမျိုးရေး၊ ဘာသာရေး၊ လူမှုရေးနှင့် ပညာရေး အဆင့်အတန်းများကြောင့် ဘေးဖယ်ခံထားရသော လူများနှင့် အုပ်စုများ၏ လိုအပ်ချက်များနှင့် ဖြစ်ရပ်များကို အထူးဂရုစိုက်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ အချိန်တူ၊ နေရာတူ ဆန္ဒပြနေသော အတိုက်အခံအဖွဲ့များအား အထူးဂရုပြုပါ။ အပြစ်ကင်းစင်သည်ဟု ယူဆခြင်းသည် ထိရောက်သော စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်မှုအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည်။ အဖမ်းခံရပါက ပြစ်မှု ကျူးလွန်သူအတွက် အခွင့်အရေးရှိပါသေးသည်။ ငြိမ်းချမ်းစွာဆန္ဒပြရန် နည်းလမ်းများစွာရှိပါသည်။ အချို့သည် ပိုမိုထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ရတတ်ပါသည်။ သတိပြုရန်မှာ အချို့သော ဆန္ဒပြသူမားသည် သိသာသော ရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိ ဉပဒေကို ချိုးဖေါက်ရန် ဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ ထိုသို့ ဖြစ်လျှင် သင်၏ထောက်ပံ့မှုကို လိုအပ်ပေမည်။ ဆက်လက်ဖတ်ရှုပါရန် ထပ်မံဖတ်ရှုပါ.
ဆန္ဒပြပွဲကို သေချာပြင်ဆင်နိုင်ရန် ၎င်းနှင့်သက်ဆိုင်သော ဉပဒေရေး၊ နိုင်ငံရေး နှင့် လူမှုရေး အခြေအနေများအပြင် ယေဘူယျပတ်ဝန်းကျင်နှင့် ပတ်သတ်သော အချက်အလက်များကို တတ်နိုင်သမျှ ရယူပါရန်။
အကယ်၍ သင်သည် ဆန္ဒပြပွဲများနှင့် ပတ်သတ်သော အခြေအနေများကို သတိမပြုမိနေသေးလျှင် ၎င်းတို့ကို သင်သိရန် ကြိုးစားသင့်ပါသည်။ ဆန္ဒပြပွဲကို ပြင်ဆင်နေချိန်တွင် ဆန္ဒပြပွဲ၏ တရား၀င် အနေအထားကို လေ့လာခြင်းနှင့် အာဏာပိုင်များနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ၏ ပွင့်လင်းမြင်သာစွာ ပေးသော မှတ်ချက်များနှင့် သီးသန့် ကိုယ်ပိုင်ပေးသော မှတ်ချက်မားကို မှတ်သားခြင်းများနှင့် စတင်ပါ။ ဆန္ဒပြပွဲ၏ အကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ ပြည်သူလူထုနှင့် မီဒီယာများ၏ သဘောထားနှင့် အရင်က ထိုကဲ့သို့ ဆန္ဒပြပွဲများတွင် အကြမ်းဖက်သော ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွား ဖူးသလား စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ဆန္ဒပြပွဲ ပြုလုပ်မည့် လမ်းကြောင်းတလျှောက် (သို့မဟုတ်) နေရာတွင် ပြဿနာဖြစ်နိုင်မည့် မကောင်းသည့် အခြေအနေများကို သိရှိအောင်လုပ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ ပိတ်ဆို့မှုများ၊ ဉမင်လှိုဏ်ခေါင်းများ၊ တံတားများ (သို့မဟုတ်) အလွန်အမင်း ကာကွယ်ထားသော အများပြည်သူဆိုင်ရာ အဆောက်အအုံများ၊ သမိုင်းဝင်နေရာများ (သို့မဟုတ်) ရန်သူ၏ ရုံးခန်းများပင်ဖြစ်သည်။
ဘေးအန္တရာယ်များသည် ဆန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့များမှ တန်ပြန်ဆန္ဒပြခြင်းများ၊ အကြမ်းဖက် အဖွဲ့များနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မကြေမနပ်ဖြစ်နေသော ရပ်ကြည့်သူများလည်း ရှိနေနိုင်ပါသည်။
လူစုဝေးမှု ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိပါသည်။ အစည်းအဝေးများ၊ အစုလိုက်အပြုံလိုက် လှုပ်ရှားမှုများ၊ ဆန္ဒပြပွဲများ၊ နေရာမဖယ်ပဲ ဆန္ဒပြခြင်းများ၊ အလုပ်ရုံများ အပြင်တွင် ရပ်၍ ဆန္ဒပြချင်းများ၊ Flash Mobile ချီတက်ပွဲများ၊ တစ်ပြေးညီတည်း ပုံတူစွာ ချီတက်ခြင်းများ၊ တန်းစီ လှည့်လည်ခြင်းများ (သို့မဟုတ်) နှစ်မျိုးပေါင်းစပ်၍ စုဝေးမှုများ၊ လူစုဝေးမှု တစ်ခုချင်းစီတွင် မတူညီသော ခြိမ်းခြောက်မှုများ၊ အခွင့်အလမ်းများနှင့် တရားဝင်သက်ရောက်မှုများစွာ ရှိပါသည်။ စီစဉ်သူများနှင့် ဆက်သွယ်ပြီး သူတို့၏ အစီအစဉ်များကို နားလည်ရန်အချိန်ယူပါ၊
စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်း မတိုင်မှီ သက်ဆိုင်ပါ၀င်သူများနှင့် သူတို့၏ အစီအစဉ်များကို နားလည်ရန် အချိန်ယူပါ။ ဆန္ဒပြသူများသည် ပုံစံတူ တစ်သားတည်းဖြစ်သော အဖွဲ့ (သို့မဟုတ်) ကွဲပြားခြားနားသော ရည်ရွယ်ချက်များသည် မည်သည့်ပုံစံဖြစ်သလဲ ? ဘယ်လို လူမျိုးတွေက ရန်သူတွေ ဖြစ်နိုင်မလဲ? ယခုကိစ္စ၏ ဆန္ဒပြခွင့်ကို တားဆီးရန် မည်သူက ကြိုးစားနေပါသလဲ?
ထိုရန်သူများသည် ဆန္ဒပြသူများအပေါ် အရေးယူခြင်းမပြုရန် သင်ကြိုးစားဖျောင်းဖျသင့်သည့် သက်ဆိုင်ပါဝင်သူများ ဖြစ်သည်။ ဘယ်လိုလူမျိုးတွေက ဆန္ဒပြသူများ၏ မဟာမိတ်တွေ ဖြစ်နိုင်သလဲ? ပြည်သူလူထုနှင့် မီဒီယာ၊ သံရုံးများ၊ အခြားလူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ ပြည်နယ်၏ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုများ နှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့၀င်များ စသည်တို့ကို ထည့်သွင်းစဉ်းစားပါ။ ၎င်းတို့သည် သင်၏ စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်မှုများအတွက် အဓိက ပရိသတ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ ထိုမျှသာမက ၎င်းတို့အနက်မှ အချို့သည် အတိုက်အခံ အဖွဲ့များအပေါ်တွင် ဖိအားပေး၍ ဆန္ဒပြမှုကို လေးစားရန် ပြောနိုင်ပါသည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် မည်ကဲ့သို့ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများ ရှိမည်နည်း? ၎င်းတို့နှင့် ဆက်သွယ်ထားခြင်းဖြင့် သင်၏လုပ်ဆောင်မှုများကို သတိပြုမိပြီး ပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ကူညီနိုင်ပါသည်။
ဆန္ဒပြပွဲပြုလုပ်မည့် နေရာနှင့် အကျွမ်းတဝင်ရှိခြင်းဖြင့် အရေးကြုံလာလျှင် အန္တရာယ် နှင့် အခွင့်အရေး ယူနိုင်မှုများကို သိရှိပါ။
ဆန္ဒပြမည့် လမ်းကြောင်းနှင့် ၎င်း၏သွင်ပြင်လက္ခဏာများကို အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်ရန် သင်ကိုယ်တိုင် လေ့လာသင့်သည်။ ဆန္ဒပြပွဲတွင်ပါဝင်သူများ၏ လုံခြုံရေးအပေါ် သက်ရောက်မှု ရှိနိုင်သည့် ဆန္ဒပြပွဲနေရာ၏ တိကျသော ဝိသေသလက္ခဏာများကို စာရွက်များ၊ ဒစ်ဂျစ်တယ် (သို့မဟုတ်) နှစ်မျိုးလုံးဖြင့် မှတ်သားထားသင့်သည်။ သေချာသော စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်မှု ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဆန္ဒပြသူများနှင့် သူတို့၏တည်နေရာများကို သိရှိနားလည်ရန် အရေးကြီးပါသည်။
ဖြစ်ပေါ်နိုင်သည့် ရာသီဥတု အခြေအနေ ၊
အများပြည်သူ သယ်ယူပို့ဆောင်ရေး၏တည်နေရာ ၊
အနီးဆုံးဆေးရုံရှိရာ အကွာအဝေး၊ အရေးပေါ်ဝန်ဆောင်မှုများနှင့် ရဲစခန်းများတည်ရှိသည့် အကွာအဝေးများကို သိရှိအောင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။
သင်သည် အရင်က ထိုနေရာကို ရောက်ဖူးခဲ့သည့်တိုင်အောင် မြေပုံတစ်ခုကို အချိန်ယူပြီး ကြိုတင်ပြင်ဆင်ပါ။ စစ်ဆေးရန် အချိန်ယူပါ။ ၎င်းသည် သင်၏ ပတ်ဝန်းကျင် သိမြင်မှုကို တိုးပွားစေပါလိမ့်မည် ဖြစ်ပါသည်။
ဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်း ဆန္ဒပြသူများနှင့် စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်မည့်သူများ ကြုံတွေ့လာနိုင်သည့် အန္တရာယ်များကို စဉ်းစားပါ။ ထိုမှသာ သင်သည်မှန်ကန်သော လုံခြုံရေး အစီအစဉ်များကို ပြုလုပ်နိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
ဆန္ဒပြမှု၏ အခြေအနေကို သိသည်နှင့် တစ်ပြိုင်နက် သင်သည် ဆန္ဒပြသူများနှင့် သင်၏ လုပ်ဆောင်မှုများ၊ ခြိမ်းခြောက် အန္တရာယ် ဖြစ်စေမှုများကို ဖေါ်ထုတ်နိုင်ပေမည်။ ဆန္ဒပြမှုများတွင် ဖြစ်လေ့ရှိသော အန္တရာယ်များမှာ ဆန္ဒပြမှုကို တရားမဝင်သော ကိုယ်ထိလက်ရောက်ပြုမူခြင်း (သို့မဟုတ်) မျက်ရည်ယိုဗုံးများ (သို့မဟုတ်) အခြားအကြမ်းဖက်သော ပုံစံများကို ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်ပါသည်။ ထို့အပြင် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သော မစ်ရှင်များသည် ဖြစ်ပွားသော အခြေအနေများကို အသေးစိတ် ထုတ်ဖော်ပြသခြင်းဖြင့် ဘက်လိုက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) လက်စားချေခြင်း စသော စွပ်စွဲမှုများနှင့် ရင်ဆိုင်ရနိုင်သညါ။
မည်သည့်အရာသည် ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူပြီး မည်သည့်အရာသည် အမြင့်ဆုံး အကျိုးယုတ်မှု ဖြစ်စေနိုင်သည် ကဲ့သို့သော ဖြစ်ပွားနိင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို စာရင်းပြုစု၍ ဉီးစားပေးမှု ပြုလုပ်ပါ။ ဖြစ်ပွားရန် လွယ်ကူမှုနှင့် အကျိုးသက်ရောက်မှုများသော ခြိမ်းခြောက်မှုများကို သိရှိသည်နှင့် သင်သည် ထိုအရာများ၏ ဖြစ်နိုင်ချေနှင့် သင့်ကို သက်ရောက်မှုများကို လျော့ချနိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို စဉ်းစားနိုင်သည်။ ထိုကဲ့သို့ စီစဉ်မှုများတွင် အခြားသူနှင့် ပူးပေါင်းခြင်း (သို့မဟုတ်) သင်ကိုယ်သင် ကာကွယ်ရန် ကိုယ်ပိုင် အစီအစဉ်များ ပြုလုပ်ခြင်းတို့ ပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤဆန်းစစ်ခြင်းများကို ဆန္ဒပြပွဲ မတိုင်မီ အချိန်အနည်းငယ် ကြိုတင်၍ ပြုလုပ်သင့်သည်။ ထိုမှသာ အန္တရာယ်လျော့ချရန် လိုအပ်သော သင်၏လုပ်ဆောင်နိုင်မှုအသစ်များ (သို့မဟုတ်) အပြင်အဆင်များ ပြုလုပ်နိုင်ရန် သင့်အား လုံလောက်သော ပြင်ဆင်ရမည့်အချိန်ရရှိမည် ဖြစ်ပါသည်။ ဥပမာအားဖြင့် အခြေခံ ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုများကို လေ့လာြခင်းသည် သင့်အတွက် အသုံးဝင်နိုင်သည် (သို့မဟုတ်) မစ်ရှင်အား တိုးမြှင့်လက်ခံနိုင်ရန်အတွက် အချို့သော အာဏာပိုင်များအား စည်းရုံး လှုံ့ဆော်ရန် လိုအပ်သည်ကို သင်သိကောင်းသိနိုင်ပါသည်။
သင်အလျှင်လိုနေပါက (သို့မဟုတ်) အလွန်စိတ်ဖိဆီးနေပါက ထိုကဲ့သို့ ဆန်းစစ်ခြင်းများ ကို ပြုလုပ်ရန် ခက်ခဲသည်။ ဆန္ဒပြပွဲ၏ အကြောင်းရင်းခံကို သင်မည်မျှ ပါဝင်မှု စိတ်အားထက်သန်သည် ဖြစ်စေကာမူ သင်၏ပါဝင်ခြင်းအတွက် စီမံကိန်း ရေးဆွဲရာတွင် သင်သည် သင့်တင့်လျောက်ပတ်သော စိတ်အခြေအနေရှိရန် အလွန်အရေးကြီးသည်။ သင်၏ သိမြင်ခံစားမှုများကို သင်၏ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများနှင့် တိုင်ပင်ပြီး မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်များသည် သင့်အား အန္တရာယ် ဖြစ်စေနိုင်သည့် အခြေအနေများကို ချင့်ချိန်ကာကွယ်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ ထိုအန္တရာယ်များကို အပိုအလိုမရှိပဲ သေချာစွာ ချင့်ချိန်နိုင်ရန်ကြိုးစားပါ။ ဆန္ဒပြပွဲများ မတိုင်မီအန္တရာယ် ဖြစ်ပွားနိုင်မှုကို ဆန်းစစ်ခြင်း ပြုလုပ်သင့်ပြီး သင်၏ နည်းဗျူဟာများကို ကြိုတင်ခန့်မှန်းရန် မလွယ်ကူစေရန်အတွက် ပြောင်းလဲမှု လုပ်ဆောင်ရန် စဉ်စားသင့်ပါသည်။
အန္တရာယ်ဖြစ်ပွားနိုင်မှုများကို မည်သို့လျော့ချမည်နှင့် အရေးပေါ်အခြေအနေများကို မည်သို့ တုံံ့ပြန်မည်ကို လုပ်ဖော်ကိုင်ဘက်များနှင့် သဘောတူညီမှု ရယူပါ
ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှု အားလုံးပေါ်မူတည်၍ စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သူများနှင့် ရှင်းလင်းသော အစီစဉ်များ ရေးဆွဲသင့်ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်တွင် သင်ခန့်မှန်းထားသော အန္တရာယ် ခြိမ်းခြောက်မှုများကို လျော့နည်းစေရန်သင် လုပ်ဆောင်မည့် အရာများနှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေများ ဖြစ်လာခဲ့ပါက ထိုအန္တရာယ်၏ အကျိုးသက်ရောက်မှုကို လျော့ချရန် ပြုလုပ်မည့် လုပ်ဆောင်မှုများ (Plan B) တို့ ပါဝင်သင့်သည်။ သင်၏ အစီအစဉ်များထဲတွင် လုံခြုံသော ဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းနှင့် ဒစ်ဂျစ်တယ်ပစ္စည်းများကို အသုံးပြုပုံများလည်း ပါဝင်သင့်ရုံသာမက ဆန္ဒပြပွဲအပြီး တစ်စုံတစ်ရာ မှားယွင်းခဲ့လျှင် တစ်ယောက်ကို တစ်ယောက် မည်သို့ ဂရုစိုက်မည့်အစီစဥ်များလည်း ပါရှိသင့်ပါသည်။ ထိုအစီအစဉ်များကို ရေးသားမျှဝေခြင်း (သို့မဟုတ်) ပြောကြားခြင်းဖြင့် မျှဝေနိုင်သည်။ အဓိကအချက်မှာ အဖွဲ့အတွင်းရှိ လူတိုင်းသည် အစီအစဉ်ကို ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိရှိပြီး လိုက်နာရန် လိုအပ်ပါသည်။ သင့်တွင် ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားသော အစီအစဉ်မရှိပါက သင်သည် ဆန့်ကျင်ဘက် အဖွဲ့အပါအဝင် အခြားတစ်ဉီး၏ အစီအစဉ်များတွင် မျောပါသွားနိုင်သည်။
သင့်အလုပ်၏ သဘောထား၊ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် ဗျူဟာများကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပါ။
ဆန္ဒပြပွဲတွင် ဖြစ်ပေါ်လာသော ဖြစ်စဉ်များသည် အလွန်များပြားပါသည်။ မီးမောင်းထိုးပြလိုသော အချက်အလက်များကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပါ။ (ဥပမာ - သက်သေခံအချက်အလက်များ၊ ရဲတပ်ဖွဲ့၏ ဝင်ရောက် စွက်ဖက်မှုများ စသည်ဖြင့်) သင်လေ့လာလိုသော အကြောင်းအရာများနှင့် တွေ့ဆုံလိုသူများကို စာရင်းပြုစုထားပါ။ ဖြစ်နိုင်သော ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်ကို ဖော်ထုတ်ခြင်းသည် ပထမ အဆင့်သာဖြစ်သည်။ မည်သည့် အဖြစ်အပျက်များကိုမဆိုကောင်းမွန်စွာ တုံံ့ပြန်နိုင်ရန် (သို့မဟုတ်) တစ်စုံတစ်ဉီးအား ကာကွယ်နိုင်ရန် သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့ လုံခြုံရေးအတွက် အစီအစဉ် ရှိရန်လိုအပ်သည်။ အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ အနေဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းဖြင့် အမြင့်မားဆုံးသော အရင်းအမြစ်များနှင့် အားထုတ်မှုများကို ရရှိနိုင်သည်။ ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီ လူတိုင်း၏အခန်းကဏ္ဍများနှင့် တာဝန်ဝတ္တရားများကို ရှင်းလင်းစွာ နားလည်သင့်ပါသည်။ အခြားအဖွဲ့အစည်းများနှင့် နီးစပ်ရာ အဖွဲ့များကို ဆက်သွယ်၍ ပေါင်းစည်းပါ။ စုပေါင်းခြင်းသည် အားနည်းချက်များကို ကျော်လွှားနိုင်ပါသည်။
သင်ကိုယ်တိုင် တစ်ခုခုလုပ်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့လျှင် အနည်းဆုံး တစ်စုံတစ်ဦးအား သင့်အစီအစဉ်ကို သိအောင် အသိပေးထားပါ။ များစွာသော ကိစ္စများတွင် စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းဆိုင်ရာ မစ်ရှင်များသည် လူသိရှင်ကြား ထုတ်လွှင့်သော အခါများတွင် ပိုမိုထိရောက်ပါသည်။ ရလဒ်အနေဖြင့် ပါဝင်ဆောင်ရွက်သူများသည် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်နေကြောင်း သိရှိခြင်းဖြင့် ၎င်းတို့၏ အပြုအမူများကို ပြောင်းလဲနိုင်မည်ဖြစ်ပါသည်။
စောင့်ကြည့်လေ့လာနေခြင်းအား အခြားသူများသိရှိစေရန် မည်မျှပေါ်လွင်အောင် ပြုလုပ်မည်နှင့် စာနယ်ဇင်း၊ အာဏာပိုင်များ၊ စည်းရုံးရေးမှုးများနှင့် ဆန္ဒပြသူများ ဆက်သွယ်နိုင်မည့် နည်းလမ်းများကို ကြိုတင်ဆုံးဖြတ်ထားပါ။
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း မစ်ရှင်၏ သဘောသဘာဝနှင့် ရည်ရွယ်ချက်များကို သတ်မှတ်ပါ။ ဆိုလိုသည်မှာ စောင့်ကြည့်ခြင်းသက်သက်ဖြစ်ခြင်းတို့ ဖြစ်ပါသည်။ အချို့သော အခြေအနေများ ဖြစ်ပွားခဲ့လျှင် သင်၏ပါဝင်မှု အဆင့်ကိုလည်း ဆုံးဖြတ်ထားရန် လိုအပ်ပါသည်။ ဥပမာ - လေ့လာခြင်း၊ ဖျန်ဖြေခြင်း (သို့မဟုတ်) နှစ်မျိုးလုံးပေါင်းစပ်၍ ပါဝင်မှု တို့ ဖြစ်ပါသည်။
အချို့ကိစ္စများတွင် စောင့်ကြည့်ခြင်းသည် ဆန္ဒပြသူများနှင့် ရဲတပ်ဖွဲ့များ (သို့မဟုတ်) ဆန္ဒပြသူ အုပ်စုအကြား ဖျန်ဖြေရန် အခန်းကဏ္ဍ မှပါဝင်သည် ။ စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သော မစ်ရှင်ကို လူသိရှင်ကြားဖြစ်ရန် ပြုလုပ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများစွာ ရှိပါသည်။ (Monitor / Conflict resolution techniques)
သင်၏ ဘလော့ (သို့မဟုတ်) ဝက်ဘ်ဆိုက်များတွင် အများသိရန် ကြေငြာခြင်း
သင့် ကြေငြာချက် မစ်ရှင် ၏ လွတ်လပ်ခွင့် ၊ သမာသမတ်ကျမှု နှင့် မြင်ကွင်း (သို့မဟုတ်) နိုင်ငံတကာ ဥပဒေသတ်မှတ်ချက်များ နှင့် အညီဖြစ်စေရန် ရဲတပ်ဖွဲ့များနှင့် ဒေသဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များနှင့် တိုင်ပင်သော အစည်းအဝေးများ
သံရုံးများ၊ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ လူ့အခွင့်အရေး အဖွဲ့အစည်းများ၊ စာနယ်ဇင်းများ နှင့် အာဏာပိုင်များထံသို့ မစ်ရှင်၏ အသေးစိတ် အချက်အလက်များကို အသိပေးသော အစည်းအဝေးများနှင့် အကြောင်းကြားစာများ။
သင်၏ အခန်းကဏ္ဍ ကိုသိသာအာရုံစိုက်စေမည့် အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ သို့သော် အချို့သော စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ထားသော အချက်အလက်များကို လူသိရှင်ကြား မထုတ်ဝေသေးသော ကိစ္စများတွင် သင်သည် သတိထား၍ လျှို့ဝှက်စွာဆောင်ရွက်သင့်ပါသည်။
မည်သို့ပင်ဆိုစေကာမူ ဤကဲ့သို့ လျှို့ဝှက်စွာ စီစဉ်ရသော ကိစ္စများတွင်လည်း သင်၏ မစ်ရှင်ကို တိုက်ခိုက်မှု တစ်စုံတစ်ရာ ဖြစ်လာပါက သင့်အား အကာအကွယ်ပေးနိုင်မည့် မဟာမိတ်များကို အသိပေးထားသင့်ပါသည်။
အခြားသော စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သူများနှင့် သင်၏ကိုယ်ပိုင် အခန်းကဏ္ဍ အကြောင်း ထိုကဏ္ဍကို သင်မည်ကဲ့သို့ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့် ဆန္ဒပြပွဲကို အတူတကွဆုတ်ခွာမည် ဖြစ်ကြောင်းတို့အား ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ပါ။
ဆန္ဒပြသူများကို ပံ့ပိုးရန်နှင့် မည်သည့်ဖြစ်ရပ်များကိုမဆို တုံ့ပြန်နိုင်ရန် သင်၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းနှင့် အရင်းအမြစ်များကို သိရှိပါ။ သင်၏ လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကို ပိုမိုတိုးတက်စေရန် လုပ်ဆောင်နိုင်သော ထိရောက်သည့် နည်းလမ်းမှာ အခြားလုပ်ဖော်ကိုဖက်များနှင့် အဖွဲ့အစည်းများထံမှ အတွေ့အကြုံနှင့် ဗဟုသုတများကို ရယူခြင်းပင်ဖြစ်ပါသည်။ အရေးပေါ်ဆေးကုသမှု အခြေအနေသည် ကောင်းသော ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ရှေးဦးသူနာပြုစုဌာနသို့ ကြိုတင်ဆက်သွယ်ထားခြင်းနှင့် ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း သူတို့နှင့် တိုက်ရိုက်ထိတွေ့မှု ရှိခြင်းတို့သည် စောင့်ကြည့် မှတ်တမ်းတင်သူများ ရှေးဦးသူနာပြုစုနည်းများကို သင်ကြားထားခြင်းမရှိသော အချက်၏ ပြင်းထန်မှုကို လျော့ပါးစေပါသည်။
ခြိမ်းခြောက်မှု အန္တရာယ်များသည် အကြောင်းပြချက် အမျိုးမျိုးကြောင့် ဖြစ်ပွားနိုင်ပါသည်။ အချို့သည် သင်၏ သဘောထား၊ အပြုအမူ၊ သင့်လုပ်ငန်းခွင် (သို့မဟုတ်) သင်၏ ပစ္စည်းကိရိယာများ၏ တန်ဖိုးများကြောင့် ဖြစ်နိုင်သည်။ သင်၏ လုံခြုံရေးနှင့် သင့်အလုပ်၏ မလိုလားအပ်သော အာရုံစိုက်မှုများ (သို့မဟုတ်) ရဲတပ်ဖွဲ့များ၊ ဆန္ဒပြသူများ၊ အတိုက်အခံဆန္ဒပြသူများနှင့် ယာဉ်ကြောပိတ်ဆို့မှုကြောင့် မကျေမနပ်ဖြစ်နေသော အပြင်လူများနှင့် ဆက်ဆံစကားပြောရမှုများ အပေါ် ပြန်လည်သုံးသပ်စေလိုပါသည်။
ဥပဒေချိုးဖေါက်ခြင်း (သို့မဟုတ်) ရာဇဝတ် ကျူးလွန်မှုများကို မျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ ကြုံခဲ့ရပါက သင်၏အန္တရာယ်သည် ပိုမိုကျရောက်နိုင်ပါသည်။ သင်၏ အခန်းကဏ္ဍ (ဥပမာ - သင်တန်းနည်းပြ၊ ကိုယ်စားပြု၊ မီဒီယာ၊ အဆက်အသွယ်၊ ဆေးဘက်ဆိုင်ရာ ပံ့ပိုးမှု၊ နေရာအခြေအနေစောင့်ကြည့်မှု ) နှင့် သင်၏ ဆုံးဖြတ်ရမည့် အခန်းကဏ္ဍများကို ဆုံးဖြတ်ပါ။ တာဝန်ထမ်းဆောင်နေစဉ် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဉီးချင်းစီ၏ ကန့်သတ်ချက်များ၊ ကျွမ်းကျင်မှုများနှင့် ဖြစ်နိုင်ချေများကို သတိထားစေလိုပါသည်။ လူတိုင်းသည် သူတို့​၏ အလုပ်များအတွက် လိုအပ်သောကိရိယာများကို သိရှိပြီး ကျွမ်းကျင်မှုရှိသင့်သည်။ ကိုယ်ပိုင် လုပ်ဆောင်ရမည့် ကိစ္စများကို စီစဉ်ရန်နှင့် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး အမြင်များကို စစ်ဆေးရန် အချိန်ယူပါ။
လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေချိန်တွင် တစ်ဦးနှင့် တစ်ဦး ဆက်သွယ်မှုရှိပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေများကို အတူတကွ တုံ့ပြန်ပါ။ ဆန္ဒပြပွဲကို အတူတကွ ဆုတ်ခွာပါ။ ဆန္ဒပြပွဲပြီးလျှင် စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်သော အဖွဲ့သည် ထပ်မံစစ်ဆေးတိုင်ပင်ခြင်းကို ပြုလုပ်သင့်သည်။ အကောင်းဆုံးမှာ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦး (သို့မဟုတ်) နှစ်ဦးသည် ရှေးဦးသူနာပြု ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လူမှုကူညီစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် လုပ်ဆောင်နိုင်သော အရည်အချင်းရှိသင့်သည်။ ငယ်ရွယ်သော (သို့မဟုတ်) အတွေ့အကြုံမရှိသေးသော အသင်းဝင်များအား ပိုမိုအတွေ့အကြုံရှိသော အသင်းဝင်များနှင့် တွဲပေးထာခြင်းသည် ကောင်းမွန်သောလေ့ကျင့်ပေးခြင်း တစ်ခုဖြစ်သည်။
ချိုးဖောက်သောပြစ်မှုများကို စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် စိတ်ဖိစီးသော အလုပ်ဖြစ်ပါသည်။ ဆန္ဒပြပွဲ မတိုင်မီ၊ ဆန္ဒပြပွဲအတွင်းနှင့် ဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင် သင်​၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ကျန်းမာရေးကို ထိန်းသိမ်းနိုင်ရန် နည်းဗျူဟာများထာရှိပါ။
ဆန္ဒပြပွဲများကို စောင့်ကြည့်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းသည် ခက်ခဲပြီး စိတ်ဖိစီးမှု ဖြစ်စေသော အလုပ်တစ်ခုဖြစ်သည်။ စောင့်ကြည့်ရသော နာရီများလည်း ကြာမြင့်နိုင်ပါသည်။ အလုပ်တာဝန်များပြားပြီး စိတ်ရှုပ်စရာ အဖြစ်အပျက်များကိုလည်း ကြုံတွေ့ရတတ်ပါသည်။ ကိုယ်ပိုင် စွမ်းဆောင်နိုင်ရည် ကန့်သတ်ချက်ကို သိရှိပြီး အခြားအဖွဲ့ဝင်များနှင့် မျှဝေ၍ လုပ်ဆောင်ပါ။ အသင်းနေဖြင့် အလုပ်လုပ်ခြင်းသည် အသင်းဝင်များ အကြားတွင် လမ်းညွှန်မှု ပေးနိုင်ပြီး ရေရှည်တွင် ပိုမိုကောင်းမွန်သော နည်းလမ်းဖြစ်ပါသည်။
မည်သည့်အရာမှ မလုပ်ကိုင်မီ အောက်ပါအချက်များကို ထည့်သွင်းစဉ်းစာပါ။ အလွန်အမင်း စိတ်ဖိစီးမှုကို ခံစားရပါက သင်၏ ခန္ဓာကိုယ်နှင့် စိတ်သည် မည်သို့ တုံ့ပြန်လေ့ရှိသည်ကို သိရှိလေ့လာပါ။ သင်၏ စိတ်ဖိစီးမှုများမှ ကျော်လွန်ရန် မည်သို့သော အလေ့အကျင့် (သို့မဟုတ်) အရင်းအမြစ်များရှိသည်ကို သိရှိပြီး ထိုအရာများကို သင်၏ အလုပ်များတွင် ထည့်သုံးနိုင်ကြောင်းကို နားလည်ပါ။ သင်၏ နီးစပ်ရာ အဖွဲ့များနှင့် သင်၏ စိတ်ဖိစီးမှု၊ စိတ်ဒဏ်ရာ အတွေ့အကြုံများကို ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောဆိုနိုင်မည့် ပတ်ဝန်းကျင် တစ်ခုကို ဖန်တီးပါ။ တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး သေချာနားထောင်ပြီး (active listening) စည်းလုံးညီညွတ်မှုဖြင့် ဂရုစိုက်မှုကို တည်ဆောက်ပါ။
ဆန္ဒပြပွဲအတွင်း သင့်အတွက် အစားအစာနှင့် ရေအလုံအလောက်ရရှိရန်နှင့် ရာသီဉတုအခြေအနေ အမျိုးမျိူးအတွက် ပြင်ဆင်ထားပါ။ ဆန္ဒပြပွဲပြီးလျှင် လုံခြုံစိတ်ချရသော နေရာတစ်ခုသို့ ရောက်ရှိသည်လျှင် သင်နှင့် သင်၏နီးစပ်ရာအဖွဲ့တို့ သေချာ အချိန်ယူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုကို ပြုလုပ်ပါ။ လိုအပ်သည့်တိုင်ပင်ဆွေးနွေးမှုများ ပြုလုပ်ရန်နှင့် အထောက်အပံ့ ရရှိရင် အချိန်ယူဆောင်ရွက်ပါ။ ထိုအတွေ့အကြုံများကို တစ်ယောက်တည်း ပြန်ပြောင်းစဉ်းစားရန်နှင့် သင်၏ နေ့စဉ်ဘ၀သို့ ပြန်သွားရန်လည်း အချိန်ယူပါ။ လုံခြုံရေး အစီအစဉ်တွင် အဖွဲ့ဝင်တစ်ဉီးချင်းစီ၏ အတွေ့အကြုံနှင့် မတူညီသော အန္တရာယ် ပေါ်မူတည်ပြီး တာဝန်နှင့် ဝတ္တရားများကို ခွဲယူပါ။ လူတိုင်းတွင် လိုအပ်သော ကျွမ်းကျင်မှုနှင့် လိုအပ်မည့် ပစ္စည်းကိရိယာများရှိရန်လည်း သေချာစွာ စီစစ်ပါ။
သင်​၏ မိုဘိုင်းဖုန်း အားသွင်းကြိုးနှင့် ဘတ္တရီအပိုပါအောင် ယူပါ။ အကယ်၍ မျက်ရည်ယိုဗုံးများဖြင့် ပစ်ခတ်လျှင် သုံးရန် ရေတစ်ပုလင်းနှင့် ခေါင်းပတ်ပုဝါယူပါ။ ရှေးဦးသူနာပြု အိတ်သည်လည်း ကောင်းသော အကြံတစ်ခုပင်ဖြစ်သည်။
မယူသွားသည့် အရာများ - အထိခိုက်မခံ မှတ်တမ်းတွေ အထဲတွင် ရှိနိုင်လား? အထဲတွင် မည်ကဲ့သို့ဖိုင်များပါကြောင်း မိမိမသိသော ကိရိယာများကို မယူသွားသင့်ပါ။ သင်၏ မိုဘိုင်းဖုန်းသည် သင်၏တည်နေရာကို အခြေခံရာတွင် အသုံးပြုနိုင်သည်ကို သတိရပါ။ ဤစနစ်ကို အရင်က ဆန္ဒပြပွဲများတွင် အသုံးပြုခဲ့ဖူးပါသည်။
သင့်အား ပြသနာ ဖြစ်စေနိုင်သော အရာများ ဉပမာ - လက်နက်၊ တရားမဝင် မူးယစ်ဆေးဝါး (သို့မဟုတ်) အရက် မဖြစ်မနေ ယူရမည့် အရာများ
သက်ဆိုင်ရာ အာဏာပိုင်များကိုပေးမည့် မစ်ရှင်၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် တာဝန်များကို ဖော်ပြထားသော စာရွက် စာတမ်းများ။
သင့်အတွက် လိုအပ်သော ဆေးဝါးများ
အရေးပေါ်လိုလျှင် သုံးရန် ငွေသားအချို့
သင့်အတွက် အလွယ်တကူ ရွေ့လျားနိုင်သည့် သက်တောင့်သက်သာရှိသော အဝတ်အစားများကို ဝတ်ဆင်ပါ။
သင်၏ ဖုန်းကို ယူဆောင်လာပါက SIM ကဒ် နှင့် ဖုန်းနောက်တစ်လုံး ယူရန် စဉ်းစားပါ။ ဖုန်း ခရက်ဒစ်နှင့် ဖုန်းအပို ဘက်ထရီ ( သို့မဟုတ်) အားသွင်းကြိုး
အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များ - အရမ်းအရေးပါသူများ၏ နံပါတ်များကို သင်၏လက် (သို့မဟုတ် ) ခြေထောက်တွင် ရေးရန် စဉ်းစားပါ။
ရှေးဉီးသူနာပြု နှင့် ကိုယ့်တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု အတွက် ရှေးဉီးသူနာပြုအိတ်၊ အိမ်သာသုံး စက္ကူနှင့် သန့်ရှင်းရေးပု၀ါများ
အစားအစာနှင့် ရေအတွက် - အားရှိသော အစားအစာ များကို ယူလာပါ။ ရေကို သောက်သုံးရန်နှင့် အရေးပေါ် အခြေအနေ ကြုံရင် ဆေးကြောရန် လုံလောက်အောင်သယ်ယူပါ။ မျက်ရည်ယိုဗုံး နှင့် လောင်စေသော အရည်များရှိခဲ့လျှင် သုံးရန် ခေါင်းသုတ်ပုဝါ နှင့် ရေကူးမျက်မှန် သယ်ယူပါ။
လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖေါက်မှုများကို မှတ်တမ်းတင်ရန် ကင်မရာတစ်လုံး ယူလာရန်စဥ်းစားပါ။
အချို့နိုင်ငံများတွင် မှတ်ပုံတင် မပါခြင်းသည် ဖမ်းဆီးရန် အကြောင်းပြချက်တစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ သို့သော် အခြားနိုင်ငံများတွင် သယ်ယူရန်မလိုပါ၊ ထိုမှတ်ပုံတင်ကို သုံး၍ သင့်အပေါ် မကောင်းသည့်အရာများ ဖြစ်ပေါ်လာနိုင်ပါသည်။ မှတ်ပုံတင် ယူသင့်၊ မယူသင့်ကို မိမိအဖွဲ့နှင့် တိုင်ပင်ပါ။ ယေဘူယျအားဖြင့် သင်၏ စောင့်ကြည့် မှတ်သားသော မစ်ရှင်သည် ပွင့်လင်းစွာ ထုတ်ဖေါ်ထားလျှင် မှတ်ပုံတင် ယူခြင်းသည် သင့်အား စောင့်ကြည့် လေ့လာသူအဖြစ် ပွင့်လင်းစွာ သတ်မှတ် သိရှိနိုင်သည်။
သင်သည်သင်၏မစ်ရှင်ကိုစီစဉ်သည့်အခါအနည်းဆုံးအစ တွင် ထိခိုက်လွယ်သောအသေးစိတ်အချက်အလက်အချို့ကိုလျှို့ဝှက်ထားသင့်သည်။ အကယ်၍ သင်သည်အင်တာနက်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများအားဆန္ဒပြရန်စီစဉ်နေလျှင်သို့မဟုတ်ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်လိုပါကသင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်နှင့်သင်၏ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်မှုကိုကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကိုသင်စဉ်းစားလိုပေမည်။ တစ်ခါတစ်ရံအာဏာပိုင်များက ဆန္ဒပြမှုများကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခြင်း၊တားဆီးခြင်း၊ နှောင့်ယှက်ခြင်းပြုရန် ဆန္ဒပြမှုများကိုစောင့်ကြည့်တက်သည်။ အစိုးရနှင့်ပုဂ္ဂလိကကုမ္ပဏီများသည်တိကျသောစကားလုံးများသို့မဟုတ်ရုပ်ပုံများကို အသုံးပြု၍ လူမှုကွန်ယက်များတွင်သုံးစွဲသူအမည်များကိုဖော်ထုတ်ရန်လေ့လာခြင်း၊ စိမ့်ဝင်ခြင်းနှင့်အလိုအလျောက်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်များကဲ့သို့နည်းဗျူဟာများကိုအသုံးပြုနိုင်သည်။ လှုပ်ရှားမှုတစ်ခုကိုစီစဉ်ရန်သို့မဟုတ် ပါ၀င်ရန်သင်၏လူမှုရေးကွန်ရက်များ၌သင်၏အမည်အစစ်အမှန်ကိုအသုံးပြုခြင်းကိုရှောင်ရှားသင့်ပြီး သင်၏ browsing အားအမည်မသိရန် VPN သို့မဟုတ် Tor browser ကိုသုံးရန်စဉ်းစားနိုင်သည်။
လက်ကိုင်ဖုန်းခေါ်ဆိုမှုများ၊ SMS စာတိုများနှင့်အသုံးများသော messenger application များစွာသည် ခိုးနားထောင်ရန်အလွန်လွယ်ကူပြီး အာဏာပိုင်များနှင့်အခြားဆန့်ကျင်သူများက ဆန္ဒပြပွဲကို စောင့်ကြည့်ရာတွင် အသုံးပြုလေ့ရှိသည်။ အချို့ကိစ္စရပ်များတွင်ဆန္ဒပြပွဲတွင်သင်၏မိုဘိုင်းကိရိယာကိုသာအသုံးပြုခြင်းသည်သင့်အားခွဲခြားသိမြင်နိုင်ပြီးသင့်ကိုထိခိုက်နိုင်သည်။ ဆက်သွယ်ရေးအတွက်လက်ကိုင်ဖုန်းသုံးရန်သင်ဆုံးဖြတ်ပါကအောက်ပါဝိသေသလက္ခဏာများကို အခြေခံ၍ သတ်သတ်မှတ်မှတ်အက်ပ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန်သတိရပါ။
အာဏာပိုင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ရန်သူများနှင့် ပွင့်လင်းမြင်သာသောဆက်ဆံရေး (open source) တာ၀န်ခံမှုရှိသောကုမ္ပဏီများပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများ။
အာဏာပိုင်များနှင့် / သို့မဟုတ်ရန်သူများနှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာသောဆက်ဆံရေး တာ၀န်ခံမှုရှိသောကုမ္ပဏီများပိုင်အက်ပလီကေးရှင်းများ။
အချိန်ကြာလာသည်နှင့်အမျှအက်ပလီကေးရှင်းများသည် ခေတ်နောက်ကျသွားနိုင်သည်သို့မဟုတ်အားနည်းချက်ရှိလာနိုင်သည်၊ လုံခြုံရေး သေတ္တာ (Security inaBox & Surveillance Self-Defense) ရှိမွမ်းမံမှုများနှင့်ယုံကြည်ရသောအဖွဲ့အစည်းများမှပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းများကိုစစ်ဆေးပါ။သင်၏အခြေအနေနှင့်အညီရွေးချယ်ပါ၊ အချို့သောရွေးစရာများမှာ - Signal (Android/iOS) (စကားဝှက်စာတိုများနှင့် ဖုန်းခေါ်ဆိုမှု အတွက်) နှင့် Jitsi (ကွန်ပျူတာများအတွက်)။ ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီနှင့်ပြီးနောက်၊ စကားဝှက်အီးမေးလ်များကိုဖလှယ်ရန် (PGP with Thunderbird) ကိုသင်အသုံးပြုနိုင်သည်။ သို့သော်သတိထားပါ - တစ်ခါတစ်ရံစာဝှက်ထားသောချန်နယ်များ၊ အထူးသဖြင့်စာတိုပေးပို့ချက်များအတွက်လည်းမလိုလား အပ်သောအာရုံစူးစိုက်မှုကိုရရှိနိုင်သည်။ ဆန္ဒပြပွဲမတိုင်မီလုံခြုံစိတ်ချရသောကိရိယာများနှင့်အက်ပ်များအားလုံးကိုအသုံးပြုလေ့ကျင့်ပါ၊ သို့မှသာသူတို့မအောင်မြင်ပါကမည်သို့ရွေးချယ်နိုင်မည်ကို သင်သိနိုင်သည်။
စောင့်ကြည့်သူများအကြားရှင်းလင်းသောဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ် နှင့် အရေးပေါ်အဆက်အသွယ်များရယူထားပါ။ ဆန္ဒပြမှုတွင်မပါ၀င်သူများနှင့်ပုံမှန်ဆက်သွယ်ခြင်းဖြင့် သင်လုံခြုံကြောင်းအသိပေးပါ။
အောင်မြင်သောစောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့အတွက် ညှိနှိုင်းဆောင်ရွက်ခြင်းနှင့်အရေးပေါ်အခြေအနေများကိုတုန့်ပြန်ခြင်းအတွက်ရှင်းလင်းသောဆက်သွယ်ရေးအစီအစဉ်ရှိ ခြင်းသည်ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ သင်မမျှော်လင့်သောအဖြစ်အပျက်များကိုကိုင်တွယ်ရန်လိုကောင်းလိုလိမ့်မည်ဖြစ်သောကြောင့်၊ သင်မည်သူနှင့် ဘယ်ချိန်မှာဘယ်လိုဆက်သွယ်ရမည် ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းသိနိုင်သည်။
သင်သို့မဟုတ်သင်၏အဖွဲ့သည်ဆန္ဒပြပွဲတွင်မပါသူတစ် ဦး နှင့်အဆက်အသွယ်ရှိသင့်သည်။ ဆက်သွယ်မည့်အချိန်များစီစဉ်ပါ၊ လုံခြုံရေးညွှန်းကိန်းများမျှဝေပါ၊ တစ်ခုခုမှားယွင်းသွားပါကသင်ဘာလုပ်မည်ကိုသဘောတူရ မည်။ လိုအပ်ပါကအရပ်ဘက်လူ့အဖွဲ့အစည်းများနှင့်လူ့အခွင့်အရေးအဖွဲ့များမှတဆင့်ပြုလုပ်ပါ။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင်သင်ဆက်သွယ်နိုင်သောလူများ (ဥပမာ - ရှေ့နေများ) အဖွဲ့အစည်းများကိုစာရင်းပြုစုထားပါ။ စာရင်းကိုသင်၏မိုဘိုင်းတွင်စာရင်းနံပါတ်ဖြင့်သိမ်းထားပါ၊ သို့သော်သင့်ဖုန်းပျောက်ဆုံးခြင်းသို့မဟုတ်ဘက်ထရီသို့မ ဟုတ်ငွေကုန်သွားခြင်းတို့အတွက်စာဖြင့်မိတ္တူကူးထားပါ။သင်ဘာမှမကျန်တော့လျှင်အရေးအကြီးဆုံးနံပါတ်များကိုသင်၏လက်မောင်းသို့မဟုတ်ခြေထောက်များပေါ်တွင်ရေးသားနိုင်သည်။
သင့်အဖွဲ့နှင့်အခါအားလျော်စွာအချိန်မရွေး check-in လုပ်ပါ (ဆက်သွယ်ပါ)။ သင် check-in လုပ်သောအခါသင်၏တည်နေရာ၊ လုံခြုံရေးအခြေအနေနှင့်သင်၏စက်ပစ္စည်းများ၌မည်မျှ ဘက်ထရီကျန်နေသည်စသည့်သက်ဆိုင်ရာသတင်း အချက်အလက်များကိုပေးပါ။ ဗဟိုချက်လက်မှတ် ၀င်ရောက်မှုအစီအစဉ်ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့ထံမှဆက်သွယ်မှုကိုစောင့်ဆိုင်းနေသူများကိုစိုးရိမ်မှုကိုလျှော့ချနိုင်သည်။
သင်ဘက်ထရီကုန်သွားတဲ့အခါ ဒါမှမဟုတ် လက်ကိုင်ဖုန်းအချက်ပြမီးပြတ်သွားခြင်း၊ ပိတ်ဆို့ခံရခြင်းများရှိရင်အခြားဆက်သွယ်ရေးနည်းလမ်းများ (ဥပမာ - ဂြိုလ်တုဖုန်းများ၊ အနီးအနားရှိ WiFi သို့မဟုတ်အများသုံးတယ်လီဖုန်းများ) ကိုစဉ်းစားပါ။ ထို့အပြင်၊ သင်၏ဆက်သွယ်ရေးအတွက်စာဝှက်ထားသောချန်နယ်များကိုအသုံးပြုရန်သင်အလေးအနက်စဉ်းစားသင့်သည်၊ အကြောင်းမှာစာဝှက်ခြင်းမပြုခဲ့သည့်ချန်နယ်များကိုစောင့်ကြည့်ခံရဖွယ်ရှိသည် (ဆက်လက်ဖတ်ရှုရန်: သင်၏ privacy ကိုကာကွယ်ပြီးလုံခြုံစွာဆက်သွယ်ပါ” အပိုင်းကိုကြည့်ပါ)
သင်မထွက်ခွာမီ သင်၏စိတ်သဘောထားမှန်ကိုသေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သင်လိုအပ်သမျှအားလုံးကိုအေးဆေးတည်ငြိမ်စွာထိန်းသိမ်းပါ။ ဆန္ဒပြပွဲ တွင်စစ်ဆေးခြင်းခံရပါက သင်၏ အခွင့်အရေးကိုသိပါ။
သင်မထွက်ခွာမီတွင် အာရုံစူးစိုက်ရန်အချိန်အနည်းငယ်ယူပြီး သင်တွင် သင်၏မစ်ရှင်စတင်ရန်သင့်လျော်သောစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာအခြေအနေရှိ‌ကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။ သင်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီဆိုပါကနောက်ဆုံးမိနစ်စစ်ဆေးမှုများနှင့်အလုပ်များကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
ဆန္ဒမပြမှီselfie ရိုက်ပြီးမိမိသူငယ်ချင်းများကိုပို့ပေးထားပါ။ပြသာနာတစ်ခုခုအရေးကြုံလာပါက အသုံးဝင်နိုင်ပါသည်။
အာဏာပိုင်များအနေဖြင့်ဆန္ဒပြသူများအား အခြားလက်နက်များ (သို့) အရက်နှင့်မူးယစ်ဆေးဝါးများကဲ့သို့တရားမ၀င်ပစ္စည်းများအားတားဆီးရန်အတွက်ဆန္ဒပြသူများကိုတား ဆီးရှာဖွေခြင်းသည်ပုံမှန်အလေ့အကျင့်တစ်ခုသာဖြစ် သည်။သို့သော်ဆန္ဒပြသူများအားခြိမ်းခြောက် ခြင်းသို့မဟုတ်လိင်စော်ကားမှုအတွက်အကြောင်းပြချက်အဖြစ်လဲ ၎င်းကိုမကြာခဏအသုံးပြုကြသည်။ရဲက သင့်ကိုမည်သို့ရှာဖွေနိုင်သည်ကိုအုပ်ချုပ်သည့်ကောင်းမွန်စွာတည်ဆောက်ထားသောအလေ့အကျင့်ကျင့် ထုံးများရှိနိုင်သည်။မိမိ၏ရှေ့နေနှင့်တိုင်ပင်ပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့သည်ဤကိစ္စနှင့် ပတ်သက်၍ ရင်ဆိုင်ရသောတရား၀င်ကန့်သတ်ချက်များနှင့်အခြေအနေတစ်ခုစီတွင်လက်တွေ့ကျင့်သုံးနေသောအရာ များအကြောင်းကိုသိပါ။ရှာဖွေမှုတစ်ခုအားနှုတ်ဖြင့်ခုခံနိုင်မှုကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားပါ (အချို့သောအခြေအနေများတွင်ခုခံတွန်းလှန်နိုင်ရန်) နှင့် သင်နှင့်တရားမ၀င်သော အရာများမသယ်ဆောင်ရန်သေချာပါစေ။
အကယ်၍ သင်သည်ကင်မရာတွင်ချိုးဖောက်မှုမှန်သမျှကိုမှတ်တမ်းတင်မည်ဆိုလျှင် သင်၏သူငယ်ချင်းများသည်ရိုက်ကူးခံလိုသည်ဟုမယူ မှတ်ပါနှင့်။မှတ်တမ်းတင်ခြင်းမပြုမီသင်အန္တရာယ် ကင်းကြောင်းသေချာစေပြီးသင်၏ကင်မရာနှင့်မလိုလားအပ်သောအာရုံကိုဆွဲဆောင်ရန်မကြိုးစားပါနှင့်။
စောင့်ကြည့်နေစဉ်ဆန္ဒပြမှု၏အသေးစိတ်နှင့်အထွေထွေရှုထောင့်များသည်အညီအမျှအရေးကြီးသည်။ ဆန္ဒပြသူများ၏မတူကွဲပြားမှုများနှင့် ပတ်သက်၍ အကြံဥာဏ်ပေးမည့်ဆန္ဒပြပွဲများ၏အထွေထွေကိုယ်ရေးကိုယ်တာနှင့်သတင်းအချက်အလက်အလုံအလောက်ရရှိ ရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ၊ သို့သော်သူတို့၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန်အရေးကြီးကြောင်းဘယ်တော့မှမမေ့ပါနှင့်။
မြင်ရသောအရာများ (နဖူးစည်းစာတန်းများ၊ အလံများစသည်တို့)၊ အသံ (သီချင်းများ၊ မိန့်ခွန်းများ၊ ကြွေးကြော်သံများ) ကိုအာရုံစိုက်ပါ။ ဆန္ဒပြသူများ၏သဘောထား (အထူးသဖြင့်ဆန့်ကျင်သောအမြင်များရှိသည့်အခါ) နှင့်ကြည့်ရှုသူများ၏သဘောထားများကိုဖမ်းယူရန်အလွန်အရေးကြီးသည်။ ရဲတပ်ဖွဲ့ရှိနေခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်အရာရှိများ၊ သူတို့၏ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ဆန္ဒပြသူများနှင့်အပြန်အလှန်ဆက်ဆံမှုများအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်များစုဆောင်းရန်အရေးကြီးသည်။
အနီးကပ်ရိုက်ချက်များသည်အကောင်းဆုံးရွေးချယ်မှု မဟုတ်ပါ။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှတိုက်ပွဲတစ်ခု၏အလယ်တွင်ဖြတ်တောက်ခြင်းသို့မဟုတ်တွန်းအားပေးခြင်းများကိုရှောင်ရှားရန် အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုချုံ့ခြင်းရိုက်ချက်များဖြင့်ဖမ်းယူနိုင်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲ (သို့) ဆန္ဒပြပွဲတခုခုအတွင်းမှာလူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတစ်ခုကိုသင်တွေ့လျှင်၊ ပထမဆုံးဉီးဆုံးလုပ်သင့်သည်မှာ သင့်၏လက်ကိုင်ဖုန်း (သို့) ကင်မရာတွင်မှတ်တမ်းတင်ပြီး၊ နောက်ပိုင်းတွင် အွန်လိုင်းမှာ (သို့) တရားဝင်သုံးစွဲဖို့ဝေမျှသင့်သည်။ကင်မရာအသုံးပြုမှုကိုရဲများကခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခုအဖြစ်သိမြင်နိုင်သည်။ သင်ဘေးကင်းလုံခြုံသည့်နေရာတွင်ရှိနေပါက ကင်မရာကိုပိတ်ထားရန်တောင်းဆိုသည့် အချိန်အထိ မှတ်တမ်းတင်ခြင်းကိုမရပ်ပါနှင့်။ကင်မရာနှင့်စကားပြောခြင်း (သို့) selfie စတိုင်လ်ဓာတ်ပုံရိုက်ခြင်းဖြင့် သင်သည်မျက်မြင်သက်သေတစ်ဦး ဖြစ်ကြောင်းသက်သေပြရန်နောက်မှအသုံးဝင်ပါလိမ့်မယ်။ထိုအဖြစ်အပျက်ကိုမှတ်တမ်းတင်ရန်၊ ရဲ၊ ပစ္စည်းကိရိယာနှင့်ရုပ်အသွင် စသည်ဖြင့် ရဲတပ်ဖွဲ့ ၀င်များ၏ အသေးစိတ်အချက်အလက်များကို မှတ်တမ်းတင်ရန်မှာလည်းအရေးကြီးသည်။အချိန်နှင့် တည်နေရာ မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။အဖမ်းခံရသူ၏အမည်၊ အသက်နှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအချက်အလက်ကိုရယူရန်မှာ အလွန်အရေးကြီးသည်။ဖြစ်နိုင်လျှင်ဖမ်းဆီးသူအရာရှိ၏ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအသွင်အပြင်၊ ရာထူး၊ မော်တော်ယာဉ်လိုင်စင်ပြားများကိုအသေးစိတ်ရယူပါ။ သင်သည်အဖြစ်အပျက်၏ အချိန်နှင့် တည်နေရာနှင့်ပတ်သက်သော သတင်းအချက်အလက်များကိုသေချာစွာရယူသင့်သည်။ အတည်ပြုရန်ရည်ရွယ်ချက်များအတွက် metadata များများသိမ်းဆည်းရန် ProofMode ကိုအသုံးပြုပါ။
အကယ်၍ သင်သတိမထားလျှင်မှတ်တမ်းတင်ခြင်းနှင့်မျှဝေခြင်း သည် သင်သို့မဟုတ်အခြားသူများကို ဒုက္ခရောက်စေနိုင်သည်။ပထမဦး ဆုံးအနေနှင့်၊ သင်မရိုက်ကူးခင် သင်သည်လုံခြုံမှုရှိသည့်နေရာတွင်ရှိနေရမည်။ သင်အဖြစ်အပြတ်ရိုက်ကူးနေပုံကို အခြားသူတစ်ဉီးကရိုက်ကူးထားသင့်သည်။အကယ်၍သင်သည်စမတ်ဖုန်းတစ်လုံးကိုအသုံးပြုနေသည်ဆိုလျှင်ဓာတ်ပုံများသို့မဟုတ်ဗွီဒီယိုများကိုအန္တရာယ်ကင်းစွာရိုက်ကူးရန်နည်းလမ်းများစွာရှိသည်။ Obscuracam (Android/Obscuracam Website) သည်သင်မျက်နှာများမှုန်ဝါးစေရန်ခွင့်ပြုသည်။ စာကိုပေးပို့ရန်စာဝှက်မထားသော MMS စာများကိုရှောင်ပါ။ Windows, Linux, macOS များတွင် Signal (Android/iOS) သို့မဟုတ် PGP (Thunderbird) စသည့်စာဝှက်ပေးပို့ရေးကိုအသုံးပြုရန်စဉ်းစားပါ။ ကို အသုံးပြု၍ သင်၏ကိုယ်ပိုင်အချက်အလက်ကိုကာကွယ်သည့်အနေ ဖြင့်အကြောင်းအရာများကိုအွန်လိုင်းပေါ်တွင်တင်နိုင်သည်။ အကယ်၍ သင်သည် SD ကဒ်တွင်အကြောင်းအရာကိုသိမ်းဆည်းထားပါကသင်၏ ဖုန်းကိုစာဝှက်လုပ်ပါ။ - ၎င်းကိုလုံခြုံစိတ်ချရသောသူတစ်ဦး အားပေးပါ။ ပုံများနှင့်ဗွီဒီယိုများကိုပိုမိုလုံခြုံစိတ်ချစွာမျှဝေပုံကို "လုံခြုံစွာထုတ်ဝေရန်" အပိုင်းကိုကြည့်ပါ။
နိုးနိုးကြားကြားရှိပါ။ အခြေအနေက မြန်မြန်ဆန်ဆန် ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် ပုံမှန်မဟုတ်တဲ့အရာတစ်ခုကို တွေ့တဲ့အခါ ဆုံးဖြတ်ချက်တွေကို အတူတကွပြုလုပ်နိုင်အောင် သင့်ရဲ့စောင့်ကြည့်သူချင်း သို့မဟုတ် စီစဉ်သူများနှင့် အချက်အလက်များကိုမျှဝေပါ။
သင်၏လုံခြုံရေးအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည့် သတိထားမိသော သာမန်အရာများအပြင် မည်သည်ကိုမဆို အုပ်စုအတွင်း၌ သေချာစီစစ် မျှဝေပေးရန် အရေးကြီးသည်။ ဤအချက်ပြများသည် ခြိမ်းခြောက်မှုရှိနိုင်သော အခြေအနေကို ရှောင်ရှားရန် သင့်အား စောစီးစွာ ဆုံးဖြတ်ချက်ချရန် ကူညီနိုင်မည်။ သင့်ပတ်၀န်းကျင်အခြေအနေကို အချိန်နှင့်အမျှ သတိပြုမိအောင် ကြိုးစားပါ။ ထိုဖြစ်စဉ်များကိုအခြေခံ၍ ညှိနှိုင်းလုပ်ဆောင်မှုများနှင့် ၎င်းတို့အပေါ် စောင့်ကြည့်နိုင်သည့် စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးမစ်ရှင်အတွင်း လုံခြုံရေးအဖွဲ့တစ်ဖွဲ့ကို ဖွဲ့စည်းခြင်းက အသုံးဝင်နိုင်သည်။ လက်နက်ကိုင်ဆောင်ထားသူတစ်ဉီး သို့မဟုတ် တရားမ၀င်သည့်အရာများဖြစ်သည့်၊ ဉပမာ သင့်သမာသမတ်ကျမှုကို လိုက်လျောသယောင် သို့မဟုတ် မသင်္ကာစရာတစ်ခုခု ပြုမူနေသူတစ်ဉီး၊ အကြမ်းဖက်မှုကို သုံးရန် ကြိုးပမ်းနေသူတစ်ဦး (၎င်းတို့သည် ပြစ်မှုကျူးလွန်ရန် လှုံ့ဆော် ရန်စပေးသူ အစိုးရဘက်တော်သား ဖြစ်နိုင်သည်)၊ သို့မဟုတ် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လာသူတစ်ဉီး၊ စသည်ဖြင့် အုပ်စုအတွင်းရှိသည့် ထူးခြားချက်များကို သတိထားပါ။ ရဲများ၏ အပြုအမူကို ကြည့်ပါ။ သူတို့ ဘယ်လိုပစ္စည်းမျိုးတွေ သယ်ဆောင်ထားသလဲ။ အနီးအနားမှာ အရပ်ဝတ်အရပ်စားဖြင့် ရဲများရှိနေသလား။ သင်သတိထားမိပါက ၎င်းတို့မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းဂရုပြုပြီး သူတို့၏အပြုအမူများကိုလေ့လာပါ။ ထူးဆန်းသောအရာတစ်ခုကို သင်သတိပြုမိပါက ၎င်းကို နှုတ်ဖြင့်ဖြစ်စေ၊ လုံခြုံသော ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းမှဖြစ်စေ၊ သင်၏မိတ်ဆွေများ၊ ဆွေမျိုးအုပ်စု သို့မဟုတ် စည်း ရုံးရေးမှူးများနှင့်မျှဝေပါ - ၎င်းသည် ခြိမ်းခြောက်မှုတစ်ခု ဟုတ်မဟုတ် ဆန်းစစ်ပြီး လိုအပ်လျှင် အတူတကွလုပ်ဆောင်ပါ။
မျက်ရည်ယိုဓာတ်ငွေ့များအတွက် သံပုရာသီးများ၊ ရေ၊ စီးကရက်များ၊ သို့မဟုတ် လည်စည်းပုဝါတစ်ခုကို ယူလာပါ။ ရဲမြင်းများနှင့် ခွေးများကို သတိထားပါ၊ ရေအမြှောက်များ၊ ရာဘာကျည်ဆံများနှင့် ငရုတ်ကောင်းဖျန်းရည်တို့ကို သတိပြုပါ။
တက်ကြွလှုပ်ရှားသူများနှင့် စောင့်ကြည့်သူများတွင် ဆန္ဒပြမှုများ၌ ဖြစ်တတ်သည့် အတော်အတန်ကြိုခန့်မှန်းနိုင်သည့် ခြိမ်းခြောက်မှုများရှိပြီး ၎င်းတို့အတွက် ကြိုတင် ပြင်ဆင်ထားခြင်းသည် အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်။ မျက်ရည်ယိုဓာတ်ငွေ့ သည် 'လူစုလူဝေးထိန်းချုပ်မှု' အတွက် အထူးသဖြင့် သုံးလေ့ရှိပြီး၊ ဆန္ဒပြမှုများကို နှိမ်နှင်းရန် ပိုတိုး သုံးလာကြသည်။ ဓာတုဗေဒအမျိုးအစားများသည် အဆက်မပြတ်ပြောင်းလဲနေသောကြောင့် ၎င်းတို့အတွက် ကုစားနည်းများလည်း အသီးသီးရှိသည်။ အာဏာပိုင်များက မည်သည့်မျက်ရည်ယိုဗုံးကို အသုံးပြုသည်ကို ကြိုးစားရှာဖွေပါ။ ဓာတ်ငွေ့မျက်နှာဖုံးရနိုင်လျှင် ကောင်းသည်၊ သို့သော် အဟောင်းများသုံးခြင်းကို ရှောင်ရှားပါ။ ရေကူးမျက်မှန်ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ များသောအားဖြင့် မျက်စိကို စီးကရက်မီးခိုး သို့မဟုတ် ရေဖြင့် ကုသနိုင်သည်။ သို့သော် ရေနွေး/ရေပူသည် CS ဓာတ်ငွေ့မှ နာကျင်မှုကို ပိုတိုးစေနိုင်သည်။ Antacids နှင့်စပ်ထားသည့်ရေ သို့မဟုတ် diphoterine ပျော်ဝင်ရည် (ဓာတုဆေးပက်ဖျန်းခံရခြင်းများအတွက် ရှေးဉီးသူနာပြုဆေးရည်) ကိုလည်းသုံးနိုင်ပါသည်။ ရေအမြှောက်များကိုလည်း လူစုလူဝေးထိန်းချုပ်မှုတွင် မကြာခဏ အသုံးပြုကြသည်။ နီးကပ်သည့်အကွာအဝေးအတွက် ၎င်းတို့သည်အလွန်အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် ရဲများက သင့်အား ၎င်းတို့နှင့် နီးကပ်စွာအသုံးချရန် သင်မြင်လျှင် ဖြစ်နိုင်သမျှ အမြန်ဆုံးထွက်ခွာပြီး၊ ၎င်းတို့အသုံးပြုမှုကို သေချာမှတ်တမ်းတင်ထားပါ။ ဆန္ဒပြပွဲတွင် မြင်းစီးရဲများလည်းရှိနိုင်သည်။ ရဲမြင်းများမှာ များသောအားဖြင့် အမူအကျင့်ကောင်းနေလင့်ကစား၊ သူတို့သည် ဒေါသထွက်လွယ်ပြီး သင့်အားအကန်ခံရပါက ပြင်းထန်စွာ အနာတရဖြစ်စေနိုင်သည်။ သူတို့နောက်မှ ချဉ်းကပ်ခြင်း၊ သူတို့ရှေ့တည့်တည့်တွင် မတ်တပ်ရပ်ခြင်း၊ ဆောင့်ကြောင့်ထိုင်ခြင်းတို့ကို ရှောင်ရှားပါ။
အကယ်၍ သင်သည် လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် ပတ်သက်သောအချက်အလက်များကို စုဆောင်းထားပါက ၎င်းကိုကာကွယ်ပါ။ သင်၏ဖုန်း သို့မဟုတ် အခြားကိရိယာများကို ကုတ်ခံထားပါ၊ သို့မဟုတ် ဆန္ဒပြမှုမထွက်ခွာမီ အွန်လိုင်းတွင် လုံခြုံစွာ မျှဝေပါ။
သင်နှင့်သင့်အဖွဲ့မှ စုဆောင်းရရှိသော သတင်းအချက်အလက်များသည် အစိုးရများ (သို့) သတင်းစာများတွင် တင်ပြနေသည့်အရာကို ဆန့်ကျင်နိုင်သော သက်သေအထောက်အထားများကို တင်ပြခြင်းဖြင့် စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအတွက် ခိုင်မာသောပလက်ဖောင်းတစ်ခု တည်ဆောက်နိုင်သည်။ ဤအချက်ကိုစိတ်ထဲထား၍ အချို့သူတို့သည် သင်၏ပစ္စည်းများကို စစ်ဆေးခြင်း၊ သိမ်းဆည်းခြင်း (သို့) သင့်အားလက်တုံ့ပြန်ခြင်းများဖြင့် သင်၏ သတင်းအချက်အလက်များကို မျှဝေခြင်းအား တားဆီးရန် စိတ်ဝင်စားလိမ့်မည်။ သင်၏စက်ပစ္စည်း သို့မဟုတ် ၎င်းပေါ်ရှိ အရာအချို့ကို စာဝှက်ခံထားခြင်းသည် ရဲမှဖမ်းခြင်း သို့မဟုတ် အခိုးခံရခြင်းကို ကာကွယ်ရန်အတွက် အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်။ စမတ်ဖုန်းတော်တော်များများက သင်သတိမပြုမိနိုင်သည့် သင်၏အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန်နည်းလမ်းများကို ပေးသည်။ ပြီးနောက် Android Operating System ရှိသည့် စမတ်ဖုန်းများသည် စက်ပေါ်တွင် သိမ်းဆည်းထားသောအချက်အလက်များကို စာဝှက်ရန်ခွင့်ပြုသည်။ ဖုန်း၏ လုံခြုံရေးချိန်ညှိချက်များတွင် ဖုန်းကိုစာဝှက်ရန် ရွေးစရာကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ ဆန္ဒပြမှုမတိုင်မီတစ်ရက်အလိုတွင် သင်စက်အား စာဝှက်ခံထားရန် အကြံပြုပါသည်၊ သို့မှသာ သင့်အချက်အလက်များကို ပထမဆုံးအရန်ကူးရန်နှင့် လုပ်ထုံးလုပ်နည်းအတိုင်းလုပ်ဆောင်ရန် အချိန်လုံလုံလောက်လောက်ရှိနိုင်သည်။ ဖုန်းပေါ်ရှိ Micro-SD ကို ဤရွေးချယ်မှုဖြင့် စာဝှက်မထားနိုင်သည်ကို သတိပြုပါ (သို့သော် ဖုန်း၏ကိုယ်ပိုင် သိုလှောင်မှုတွင်သာဖြစ်လိမ့်မည်။)
iPhone သို့မဟုတ် iPad တွင် မျက်နှာပြင်ကိုသော့ခတ်ရန် စကားဝှက်ကိုဖွင့်ရန်နှင့် စကားဝှက်ကို သတ်မှတ်ပြီးပါက 'ဒေတာကာကွယ်မှုကိုပိတ်ပင်ထားသည်' ဟုသေချာစေရန် သီးသန့်လုံခြုံရေးချိန်ညှိချက်များကိုထည့်ပါ။ အချို့ iPhone များတွင် passphrase ကို 10 ခု မအောင်မြင်သောကြောင့် ဖုန်းပေါ်ရှိ ဒေတာများကိုဖျက်ပစ်ရန် option လည်းပါသည်။ အရေးပေါ်အခြေအနေတွင် သင့်ဖုန်းမှ အထိခိုက်မခံသောဒေတာများကို ပယ်ဖျက်ရန်လည် ၎င်းကိုသင်သုံးနိုင်သည်။
ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာတစ်ခုပေါ်ရှိ၊ VeraCrypt သည် full disk များ၊ စာဝှက်ခြင်းအပြင် အထိခိုက်မခံသောဒေတာများကို သိုလှောင်ရန် စာဝှက်ခံထားသော volumes များ ဖန်တီးမှုကို လွယ်ကူချောမွေ့စေသော open source application တစ်ခုဖြစ်သည်။
Tor Browser သင်၏ သက်သေခံအထောက်အထား နှင့် သင်မှတ်တမ်းတင်ထားသော လူများအား ကာကွယ်ရန်အစီအမံလုပ်လျင် ဆိုရှယ်မီဒီယာတွင် အချက်အလက်ကို တိုက်ရိုက်ရှယ်ခြင်းသည် ကောင်းသောရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သည်။ Obscuracam (Android-App/Obscuracam-Website) ဆန္ဒပြခြင်းမှ မထွက်ခွာမီ မူပွားထားပြီး၊ ၎င်းကို အဖွဲ့သားများနှင့် လုပ်ဖော်ကိုက်ဘက်များအား ရှယ်ထားခြင်းသည် အခြားနည်းလမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဆိုရှယ်နက်ဝပ် သို့မဟုတ် ဝက်ဆိုဒ်တစ်ခုတွင် တိုက်ရိုက် upload မလုပ်မီ ဖြစ်နိုင်သည့် အန္တရာယ်များနှင့် သွယ်ဝိုက်ပတ်သက်နိုင်မှုများကို ချင့်တွက်တားပါ။ Spideroak & CryptDrive & Tresorit ဆိုသည်မှာ ဖိုင်များကို သင့်ကွန်ပျူတာနှင့် လက်ကိုင်ဖုန်းများအကြား အလွယ်တကူဝေမျှနိုင်ရန်ခွင့်ပြုသည့် ဖိုင်ကိုထပ်တူပြုခြင်းကိရိယာဖြစ်သည်။ မိုဘိုင်းကိရိယာထဲတွင် သိမ်းဆည်းထားသည့်သတင်းအချက်အလက်များကို ကာကွယ်ပါ
စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် ကြောက်ရွံ့မှုများသည် အစိုင်အခဲဖြစ်လာနိုင်ပြီး ဆန္ဒပြနေစဉ်အတွင်း ထိရောက်သောဆုံးဖြတ်ချက်များမချနိုင်ရန် တားဆီးနိုင်သည်။ စိတ်အေးအေးထားပါ၊ အကြမ်းမဖက် ဆက်ဆံပါ၊ သင်၏ကြောက်ရွံ့မှုများကို အတူတကွဖြေရှင်းနိုင်ရန် လုပ်ပိုင်ခွင့် ဆုံးဖြတ်ချက်များနှင့် အဆင့်များ ပြုလုပ်ပါ။
အုပ်စုများသည် စိတ်ဖိစီးမှုခံရခြင်း (သို့) ကြောက်ရွံ့ခြင်း သို့မဟုတ် ခြိမ်းခြောက်ခံရခြင်းများကို ကြုံတွေ့ရပါက ၎င်းက အုပ်စု၏ အင်အားရှိမှုအပေါ် ဆိုးကျိုးသက်ရောက်နိုင်သည်။ ထိုအုပ်စုသည် ပိုအာဏာရှင်ဆန်လာပြီး လူများအချင်းချင်း ထိခိုက်နစ်နာအောင် ပြောဆိုပြုမူမိနိုင်သည်။ သင်ဆန္ဒပြနေစဉ် ဆုံးဖြတ်ချက်များကို မြန်မြန်ဆန်ဆန်ချရန် လိုအပ်သည့်အခါ ကြောက်ရွံ့ခြင်း၊ စိတ်ဖိစီးမှုနှင့် အချင်းချင်းပြဿနာများက သင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်စွမ်းကို အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေပြီး သင့်အား အန္တရာယ်တွင်း တွန်းပို့စေနိုင်သည်။ ဆန္ဒမပြမီ ရှင်းလင်းစနစ်ကျပြီး ဆုံးဖြတ်ချက်ချနိုင်သည့် ဖွဲ့စည်းမှုတစ်ခု (clear decision-making structure) နှင့်၊ ထိုဆုံးဖြတ်ချက်များအတွက် ရှင်းရှင်းလင်းလင်း ဆက်သွယ်ရေးလမ်းကြောင်းများရှိရန် အရေးကြီးသည်။ အငြင်းပွားစရာမလိုသည့် (ဥပမာ - အရေးပေါ်ထွက်ပေါက်မဟာဗျူဟာ) ညှိနှိုင်းစရာမဟုတ်သည်များနှင့် လုပ်ရမည့်အရာများကိုဆုံးဖြတ်ပါ။ အကယ်၍ ပြဿနာကို ဆွေးနွေးရန်လိုအပ်လျှင် ဆွေးနွေးမှုတွင် မည်သူပါဝင်သင့်သည်ကိုစဉ်းစားပါ။ အုပ်စုတစ်ခုလုံးလား သို့မဟုတ် လုပ်မည့်အဖွဲ့တစ်ခုလား။ အငြင်းအခုန်ဆွေးနွေးပွဲတွင် မလိုအပ်သည်များ ပြောနေခြင်းသည်လည်း အတားအဆီးတစ်ခု ဖြစ်နိုင်သည်။ ငြင်းခုန်ဆွေးနွေးနေသည့်အခါ၊ သေချာစူးစိုက်နားထောင်ခြင်းကို (active listening) အလေ့အကျင့်လုပ်ပါ၊ သို့မှသာ အယူအဆမှားများကို ရှောင်ရှားနိုင်ပြီး ဘာကိုပြောဆိုနေသည်ကို လူတိုင်းသေချာနားလည်စေနိုင်သည်။
အရေးပေါ်အခြေအနေများကို တုန့်ပြန်သည့်အခါ စိတ်အေးအေးဆေးဆေးထားပါ။ မည်သူနှင့်ဆက်သွယ်ရမည်နှင့် သင့်ထံမှမည်သည့်သတင်းအချက်အလက်များ သူတို့လိုအပ်မည်ကို ကြိုတင်သိထားပါ။
တခါတရံ ဆန္ဒပြခြင်းတစ်ခု သို့မဟုတ် ဆန္ဒပြပွဲများတွင် အာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် ဆန္ဒပြမှု၏ရည်ရွယ်ချက်ကို ဆန့်ကျင်သော အခြားအဖွဲ့များ၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများကို သင်တွေ့မြင်နိုင်သည်။ တုန့်ပြန်မှုကိုညှိနှိုင်းနိုင်ရန် ဖြစ်ပျက်ခဲ့ရာများကို အတတ်နိုင်ဆုံးတိကျမှန်ကန်စွာ အစီရင်ခံရန်အရေးကြီးသည်။ အထူးသဖြင့်ကြောက်လန့်တုန်လှုပ်နေသည့်အခါ အခက်အခဲဖြစ်စေနိုင်သည်။
ဆန္ဒပြပွဲမှ ထွက်ခွာသည့်အခါ သတိလက်လွတ် မနေလိုက်ပါနှင့်၊ အိမ်သို့ ဘေးကင်းစွာ ပြန်ရောက်သည်ထိ သတိဖြင့်နေပါ။
i) ဆန္ဒပြမှုတစ်ခုပြီးဆုံးသွားသည့်အခါ သို့မဟုတ် သင်ထွက်ခွာသည့်အခါ၊ သင်အနားရပြီး အာရုံပျံ့လွင့်လာနိုင်သည်။ တခါတရံ အာဏာပိုင်များ သို့မဟုတ် တိုက်ခိုက်သူများက ဆန္ဒပြသူများကို အုပ်စုငယ် သို့မဟုတ် တဉီးတည်းရှိနေချိန်မှ ရွေးချယ်နှောက်ယှက်လေ့ရှိသည်။ သင်တွေ့ကြုံခဲ့သည့်ဖြစ်ရပ်များ သို့မဟုတ် သင်မြင်တွေ့ခဲ့သည်များအပေါ် အခြေခံ၍ ဆန္ဒပြပွဲကာလအတွင်း သင်၏ အန္တရာယ်တိုးလာခြင်းရှိမရှိ အကဲဖြတ်ပြီး၊ ၎င်းအရ အစီအစဉ်လုပ်ပါ။ ဆန္ဒပြမှုမှ ထွက်ခွာရန် လုံခြုံသောလမ်းကြောင်းများ ရှိမရှိသေချာပါစေ။ တခါတရံ ဆန္ဒပြမှုများတွင် လမ်းပိတ်ဆို့မှုများနှင့် အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေး မရနိုင်ပါ။ သင့်အဝတ်အစားလဲခြင်း၊ သင်၏ပစ္စည်းများကို အရန်သင့်သိမ်းဆည်းခြင်းနှင့် သင့်အသင်းဖော်အား မျှဝေခြင်းနှင့် ပေးခြင်းတို့သည် သင့်ကိုနောက်ယောင်ခံလိုက်ခြင်းရှိပါက အန္တရာယ်လျော့ပါးစေရန် ကူညီလိမ့်မည်။ ဆိုရှယ်နက်ဝပ်များတွင် တိုက်ရိုက်ရှယ်ခြင်းသည်လည်း ရွေးချယ်စရာတစ်ခုဖြစ်သော်လည်း အန္တရာယ်ရှိနိုင်သည်။ အကယ်၍ ရဲတပ်ဖွဲ့က သင်၏ကိရိယာများကို သိမ်းယူရန်ကြိုးပမ်းပါက၊ သင်၏အချက်အလက်များကို ကာကွယ်ရန် ယခင်ကသတ်မှတ်ထားသော အစီအစဉ်အတိုင်း လိုက်နာပါ။ သင်သွားမည့်လမ်းကြောင်းနှင့် ပတ်သက်၍ သင်၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များကို သတိပေးပါ။ ဘေးကင်းမှုရှိစေရန် အောက်ပါအစဉ်လိုက်အချက်များအား မမေ့ပါနှင့်
နိုးနိုးကြားကြားရှိပါ - ဘေးကင်းသည့်နေရာတစ်ခု မရောက်မချင်း သင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုစောင့်ကြည့်ပါ။
တစ်ယောက်တည်း မနေပါနှင့် - အဖော်နှင့် သို့မဟုတ် သင့်အုပ်စုဖြင့်နေပါ
အဆက်အသွယ်ရှိနေပါ - ဆန္ဒပြပွဲ ပြင်ပမှ တစ်ယောက်ယောက်အား သင်တို့ထွက်ခွာနေပြီ၊ ဘယ်အချိန်မှာ သင် ပြန်ရောက်နိုင်သည်ကို အသိပေးပါ။ အထူးသဖြင့် သင်သွားမည့်လမ်းကြောင်းကို မျှဝေရန်စီစဉ်ထားပါက ၎င်းအတွက် လုံခြုံသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုကို အသုံးပြုရန်ကြိုးစားပါ။
တန်ပြန်စောင့်ကြည့်ခြင်း - သင့်နောက်သို့လိုက်နေသည်ဟုခံစားရလျှင် တိုက်ရိုက်လမ်းကြောင်းမယူဘဲ သင့်နောက်လိုက်သူကို ရှုပ်ထွေးစေနိုင်သည့် လမ်းကိုသုံးပါ။
ကြာကြာမနေပါနဲ့ - ဆန္ဒပြမှုဖြစ်ပွားသည့်နေရာတွင် ကြာရှည်မနေပါနှင့်။
ပစ္စည်းများကို မည်သို့ကိုင်တွယ်ရမည်ကို သေချာကြည့်ထားပါ - နဖူးစီးစာတမ်းများ၊ လက်ကမ်းစာရွက်များနှင့် အခြားပစ္စည်းများက သင့်ကို သိသာပေါ်လွင်စေနိုင်သည်။ ၎င်းတို့အား အန္တရာယ်ကင်းစွာ ဖယ်ရှားပစ်ရန် ကြိုးစားပါ။
စောင့်ကြည့်ခံနေရပြီး လုံခြုံမှုမရှိဟုခံစားရပါက အဝတ်အစားလဲရန်စဉ်းစားပါ
သင်ရိုက်ကူးခဲ့သည့်ဓာတ်ပုံများ၊ အသံဖိုင်များ သို့မဟုတ် ဗွီဒီယိုများကိုဂရုပြုပါ - ၎င်းတို့ကိုဝှက်၍သယ်ဆောင်ပါ (သို့) ၎င်းတို့အားဆန္ဒပြပွဲနှင့် ထားခဲ့ပြီး မထင်မရှား ကိုယ်ယောင်ဖျောက်ပါ။
အဆင့်မြင့်စောင့်ကြည့်လေ့လာရေးအဖွဲ့များအတွက်၊ မီဒီယာများနှင့် သတင်းထောက်များနှင့်အတူ ဆန္ဒပြပွဲမှထွက်ခွာလျင် ပိုမိုကောင်းမွန်လိမ့်မည်။
သင်၏ပတ်၀န်းကျင်ကို သတိပြုမိစေရန်နှင့် ပိုမိုအနားရရန်အတွက် စစ်ဆင်ရေးမှ ခဏနားပြီး လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာသို့ ခဏသွားရန်စဉ်းစားပါ။ သင်လုံခြုံသောနေရာရောက်သည်နှင့်တစ်ပြိုင်နက် သင်၏အဖွဲ့ဖြင့် အချက်အလက်များအား ပြန်လည်မျှ၀ေပါ။ ဆန္ဒပြပွဲမှ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ပြောင်းလဲခြင်းအတွက် အချိန်အနည်းငယ်ယူပါ (ဥပမာရေချိုးခြင်း၊ ဆုတောင်းခြင်း၊ အဝတ်အစားလဲခြင်း၊ လေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ခြင်း စသဖြင့်)
ဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင်၊ စောင့်ကြည့်သူများနှင့် အချင်းချင်း အတူတွေ့ဆုံပြီး မေးမြန်းမှတ်သားပါ - လုံခြုံရေးအခြေအနေကိုစစ်ဆေးပါ၊ လုံခြုံရေးလိုအပ်သူများကို ဂရုပြုပါ၊ မစ်ရှင်၏ရလဒ်များကို လူသိရှင်ကြားကြေညာရန် အစီအစဉ်ရေးဆွဲပါ၊ နောက်တစ်ကြိမ်တွင် ပိုတိုးတက်ရန်လိုအပ်သည့် သင်ခန်းစာများကိုလေ့လာပါ။
ဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင် လုံခြုံစိတ်ချရသောနေရာ၌ သင်၏အုပ်စုနှင့် ထွက်ခွာခြင်း သို့မဟုတ် အချက်အလက်များအား ပြန်လည်မျှ၀ေရန် မေးမြန်းမှတ်သားရန် တွေ့ဆုံခြင်းသည် ကောင်းသောအကြံဖြစ်သည်။ အချက်အလက်များအား ပြန်လည်မျှ၀ေခြင်းသည် အောက်ပါတို့အတွက် အရေးကြီးသည် -
ဖြစ်လာမည့် ထိခိုက်မှုကို ကာကွယ်နိုင်ခြင်းနှင့် ဆန္ဒပြပြီးနောက် အပြီးသတ်ခြိမ်းခြောက်မှု ချင့်ချိန်ခြင်း၊
ပစ္စည်းမျှဝေရန်နှင့် မစ်ရှင်၏ရလဒ်များကို လူသိရှင်ကြားကြေညာရန် အစီအစဉ်ဆွဲခြင်း၊
နောင်လာမည့်ဆန္ဒပြမှုများကို ပိုတိုးတက်စေရန်သင်ခန်းစာများကို သင်ယူခြင်း
ခံစားချက်များကို စစ်ဆေးခြင်း - လူတိုင်းသည် သူတို့မည်သို့ခံစားရသည် ဆိုသည်ကို အုပ်စုလိုက် စစ်ဆေးပြီးမွမ်းမံနိုင်သည်။ အရေးတကြီးလိုအပ်ချက်များ (ဆေးဘက်ဆိုင်ရာနှင့် စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ) ကို ဦး စွာဂရုစိုက်သင့်သည်။
- ခြိမ်းခြောက်မှု ချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်ခြင်း - လက်ရှိလုံခြုံရေးအခြေအနေနှင့်ပတ်သက်သော အချက်ပြခြင်းများအား မျှဝေခြင်း၊ ဆန္ဒပြပွဲအပြီးတွင် အုပ်စု ရင်ဆိုင်ရနိုင်သည့် မည်သည့်ခြိမ်းခြောက်မှုကိုမဆိုနှင့် ၎င်းတို့အား မည်သို့ကိုင်တွယ်သင့်သည်ကို ချင့်ချိန်ခြင်း (သင်၏လုံခြုံရေးအစီအစဉ်များအား အဆင့်မြှင့်ခြင်း)၊
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏ရလဒ်များကို သင်၏အဖွဲ့နှင့်ဆွေးနွေးရန်အချိန်ယူပါ။ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့၊ တွေ့ကြုံခံစားသည်တို့၏ အသေးစိတ်နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်စရာများအား မျှဝေရန် လုံခြုံသောနေရာတစ်ခု သေချာရှိပါစေ။ သင်မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားကို ချက်ချင်းသိနိုင်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။ တရားမ၀င်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများအား စီစဉ်ခြင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ခြင်းက ၎င်းတို့အားရှာဖွေရန် ကူညီနိုင်သည်။ အစိုးရနှင့်သတင်းမီဒီယာများမှ မတိကျသော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော သတင်းအချက်အလက်များကို စိန်ခေါ်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် မည်သည့်အရာသည် အသုံးဝင်သည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ သားကောင်များနှင့်မျက်မြင်သက်သေများ၏ သက်သေခံချက်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ သင်၏ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ၎င်းတို့ကို ရရှိအောင်အချိန်ပေးလုပ်ပါ။
သင်ယူခြင်းနှင့် တိုးတက်ခြင်းအတွက် အခွင့်အလမ်းများကိုဖော်ထုတ်ပါ - နောက်တကြိမ်အတွက် ဘာတိုးတက်သင့်သလဲ။
နောက်ထပ်ခြေလှမ်းများ - အုပ်စုပြန်မကွဲမီ မည်သည့်ဆုံးဖြတ်ချက်များ ချရမည်နည်း။
သင်သည်တစ်ဦးနှင့်တစ်ဦး ဆက်သွယ်မှု၌ စိတ်ရှည်သည်းခံပါ၊ ရရှိထားသော သင်ခန်းစာများနှင့် နောက်ခြေလှမ်းများအား လူတိုင်း ရှင်းလင်းသဘောပေါက်စေရန် တက်ကြွစွာနားထောင်ခြင်း (active listening) ကိုလေ့ကျင့်ပါ
သင်ကမ္ဘာနှင့်ဝေမျှလိုသော ဆန္ဒပြမှုမှ ဗီဒီယို၊ အသံ သို့မဟုတ် ဓါတ်ပုံများ ရရှိပါသလား။ ကောင်းပါြပီး။ ယခု ၎င်းကို သတင်းအချက်အလက်မျှ၀ေနေခြင်းအတွက် ပြဿနာများမရှိစေရန် ရှောင်ကြဉ်ပါ - သင်မည်သူမည်ဝါဖြစ်ကြောင်းနှင့် သင့်ပတ်၀န်းကျင်ရှိအခြားသူများကို ကာကွယ်ပါ။
စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်း၏ ရလာဒ်များကို အဖွဲ့တစ်ဖွဲ့နှင့်ဆွေးနွေးရန် အချိန်ယူပါ။ အဖွဲ့ဝင်တိုင်းသည် သူတို့မြင်တွေ့ခဲ့၊ တွေ့ကြုံခံစားသည်တို့၏ အသေးစိတ်နှင့် စိုးရိမ်ပူပန်စရာများအား မျှဝေရန် လုံခြုံသောနေရာတစ်ခု သေချာရှိပါစေ။ သင်မည်သည့် သတင်းအချက်အလက်အမျိုးအစားကို ချက်ချင်းသိနိုင်ကြောင်း သေချာအောင်လုပ်ပါ။ တရားမ၀င်ဖမ်းဆီးခြင်းနှင့် သက်ဆိုင်သောပစ္စည်းများအား စီစဉ်ခြင်းကို ဦးစားပေးလုပ်ခြင်းက ၎င်းတို့အားရှာဖွေရန် ကူညီနိုင်သည်။ အစိုးရနှင့်သတင်းမီဒီယာများမှ မတိကျသော သို့မဟုတ် မှားယွင်းသော သတင်းအချက်အလက်များကို စိန်ခေါ်နိုင်ရန်အတွက် မည်သည့်သတင်းအချက်အလက်နှင့် မည်သည့်အရာသည် အသုံးဝင်သည်ကို ခွဲခြားသတ်မှတ်ပါ။ သားကောင်များနှင့် မျက်မြင်သက်သေများ၏ သက်သေခံချက်များသည် မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်၊ သင်၏ဖြစ်စဉ်ကို ပိုမိုအားကောင်းလာစေရန် ၎င်းတို့ကို ရရှိအောင်အချိန်ပေးလုပ်ပါ။
အတတ်ပညာကျွမ်းကျင်မှုဆိုင်ရာနှင့် ကျင့်ဝတ်ဆိုင်ရာ စောင့်ကြည့်လေ့လာခြင်းသည် နောက်ဆက်တွဲအတွက် နည်းဗျူဟာတစ်ခုဖြစ်သည်။
များသောအားဖြင့် ဆန္ဒပြမှုတစ်ခု ဖြစ်ပွားပြီးနောက် လူများသည် ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ပြီး စွမ်းအင်နိမ့်ကျသဖြင့် တွေ့ရှိရသော အလွဲသုံးစားမှုကို ဆက်လိုက်သည့် အစီအစဉ်ရှိရန် အရေးကြီးသည်။ ဥပမာအားဖြင့်၊ အာဏာပိုင်များနှင့် ဆက်သွယ်၍ အများပြည်သူနှင့်သက်ဆိုင်သော ကြေညာချက်ထုgတ်ပြန်ရန်နှင့် မီဒီယာများနှင့်စကားပြောဆိုရန် (သို့) စည်းလုံးညီညွတ်မှုကွန်ယက်ကိုဖွင့်ရန်အတွက် စောင့်ကြည့်စစ်ဆေးမှုကို ထိန်းထားရန် လိုအပ်နိုင်သည်။